(No. 72 , November 13, 2020)
၁။ ကရင်ပြည်နယ် မွန်ဝန်ကြီးနေရာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ပြိုင်ဘက်ကို မဲ ၈၀၀၀ သာနေ
၂။ ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့ ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ကြေညာချက် သက်တမ်းတိုး
၃။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဒီဇင်ဘာ မတိုင်မီ ကျင်းပပေးရန် AA တိုက်တွန်း
၄။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးရှိ မဲရုံတစ်ခုတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၅ဝဝ ကျော် ရှိသော်လည်း မဲလာထည့်သူတစ်ဦးမျှ မရှိခဲ့
၅။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး AA တောင်းဆိုချက်ကို တပ်မတော် လက်ခံ
၆။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ ဆန္ဒကို အလေးထားမည် ဟု NLD ကြေညာ
၇။ ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ် ၉ တွင် NLD က KNDP ကို ငါးမဲအသာဖြင့်နိုင်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် တစ်ခု လုံး ၏ မဲရလဒ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန် KNDP တောင်းဆိုထား
၈။ အမ်းတွင် လက်နက်ကြီးကျည် ထိမှန်၍ လူ ၆ ဦးဒဏ်ရာရ
၉။ မိုးကုတ်မြို့အနီး ကျေးရွာများ TNLA စစ်ကြောင်းဝင်လာသဖြင့် ဒေသခံများတိမ်းရှောင်
၁၀။ သတင်းတု သတင်းမှားကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ရခြင်းဟု KSPP ဒု ဥက္ကဌ ပြော
၁၁။ ရွေးကောက်ပွဲ နောက် သျှမ်း/တောင် RCSS/SSA လှုပ်ရှားနယ်မြေသို့ အစိုးရတပ် အင်အားဖြည့်
၁၂။ ဒဘတ် (Dabak) ကျေးရွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး စိစစ်မှုများ လုပ်ဆောင်နေ
၁၃။ တပ်ချုပ် ကိုယ်ရေးအရာရှိဟောင်း ဦးလင်းဇော်ထွန်း အပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ရေး အနိုင်ရသော မိုင်းဖြတ်တွင် ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ က မဲဆန္ဒရှင်များကို ကားအကြိုအပို့လုပ်၍ မဲထည့်ခိုင်း၊ မဲမသမာမှုများရှိ၍ SNLD တိုင်ကြားမည်
၁၄။ မြန်မာအပါအ၀င် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် သေဆုံးမှုများပြား
၁၅။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အန်အယ်လ်ဒီအပါအဝင် အားလုံးနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စား လှယ်ပြော
၁၆။ ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏ လီဆူတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ၂ နေရာကို LNDP အနိုင်ရ
၁၇။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့်ကော်မတီဖွဲ့စည်း
၁၈။ စစ်တွေ မဲသမာမှု ရွေးကော်တာဝန်ရှိသူများကို အရေးယူရန် လုပ်ဆောင်နေ
၁၉။ ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် PNO ပါတီ ၃နေရာ အနိုင်ရရှိထား-
၂၀။ မေယုမြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ပိတ်ဆို့ထားလို့ ဒေသခံတွေ အခက်ကြုံ
၂၁။ နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှု အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချ
၂၂။ ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းက မဲဆန္ဒနယ် ၇ ခုတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနိုင်ရရှိ
၂၃။ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့သည့်နယ်မြေများ၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အမြန်ဆုံးကျင်းပရန် ဥရောပသမဂ္ဂတိုက်တွန်း
၂၄။ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အကြီးစား စီမံကိန်းတွေ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့ စောင့်ကြည့်ရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ တွေပြင်ဆင်
၂၅။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးအား ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်
၂၆။ ကချင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှ ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ငွေကျပ် ၂၅ သိန်းလှူဒါန်း
၂၇။ အနာဂတ်၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ဆန္ဒ အလေးထားလုပ်မည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ကတိပြု
၂၈။ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်းပြည်နယ်များတွင် NLD က အပြတ်အသတ်နိုင်
၂၉။ တောင်ကြီး အေးသာယာမဲရုံသို့ မဲသွားပေးခဲ့သည့် အမျိုးသားတဦး ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့
၃၀။ လေရှီးမြို့နယ်၌ NLD ပါတီက မဲပေးနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်အတုပြုလုပ်ခြင်း၊ ငွေ ပေး၍ မဲထည့်ခိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်စား ကြိုတင် မဲထည့်ပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား
ကရင်ပြည်နယ်၌ မွန်တိုင်းရင်းသားရေးရာနေရာကို ဝင်ရောက်အရွေးခံသည့် MUP-မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း မင်းထွန်းလွင်က ပြိုင်ဘက် NLD-အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ထွန်းချစ်ကို မဲ ၈ ထောင်ဝန်းကျင်ဖြင့် အသာရနေကြောင်း သိရသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC) မှ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ခြင်းမရရှိသေးသောကြောင့် အတည်ပြုပြောဆိုရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း MUP ၏ မွန်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် လောင်း မင်းထွန်းလွင်က (နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် နေ့)တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ မင်းထွန်းလွင်က “UEC အတည်မပြု မချင်း က ပြောလို့မရသေးဘူး။ ခန့်မှန်းချေ မဲရလဒ်ကတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ မဲ ၈ ထောင်လောက် ပြိုင်ဘက်နဲ့ အသာရထားတယ်။ ကျနော်နဲ့ ပြိုင်တဲ့ ကျနော် အပါအဝင် ၇ ယောက်ဟာဆိုရင် ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့သူလို့ မြင်ပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါက MUP ၏ ပါတီမူဝါဒအတိုင်း ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုကိုသွားသည့်အခါ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီသွားမည့်အပြင် တိုင်းရင်းသားများ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ လုံခြုံရေး များကို လည်း ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မင်းထွန်းလွင်က ဆက်ပြောသည်။ NLD (ကရင်ပြည်နယ်)၏ လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်လည်း ကရင်ပြည်နယ်၏ မွန်ဝန်ကြီးနေရာအတွက် MUP မှ မင်းထွန်းလွင်၊ ပအိုဝ်းဝန်ကြီး နေရာ အတွက် NLD မှ ခွန်မျိုးတင့်၊ ဗမာဝန်ကြီးနေရာအတွက် NLD မှ ဦးတင်ဝင်းတို့ ရရှိ သွားကြောင်း ယမန်နေ့က ဖော်ပြထား သည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb
ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)၊ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(TNLA)နှင့် MNDAA(ကိုးကန့်)တို့ ပါဝင်သည့် ညီနောင်မဟာမိတ်(၃)ဖွဲ့အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့မှစ၍ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ တစ်ဖက်သတ် အပစ် ရပ်ခြင်းကို သက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း သဘောထား ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်အရ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ထပ် အစိုးရသက်တမ်းကို ဦးဆောင်မည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့အကြား လက်တွေ့ကျသည့် ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးညှိ နှိုင်းနိုင်ရန်အတွက် ယခုလို တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ခြင်းကို ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများလျှော့ချပြီး နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရန်အတွက် တစ်ဖတ်သတ် အပစ်ရပ်ကြေညာချက်ကို ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၂၀ ခု နှစ် အထိ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်စဲကြောင်းကို (၇)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆက်တိုက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အလားတူ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကြိုတင်ကန့်သတ်မှုမပါသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုမျိုးကို ဆွေးနွေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး စစ်မှန်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို FPNCC (ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ) ဦးဆောင်မှုဖြင့် လိုက်ပါဆွေးနွေးရန် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ၎င်းတို့၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်၌ ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။ တပ်မတော်နှင့် ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့တို့ အနေဖြင့် တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်း အပြန်အလှန် ထုတ်ပြန်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့မြေပြင် ဒေသများတွင် စစ်ရေးပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အရပ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရ မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ထို့နောက် ယုံကြည်မှု တိုးတက်ရန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ လွယ်ကူစေရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များအပေါ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ မတရားအသင်း ကြေညာချက်များကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပြီး ပထမအစိုးရ သက်တမ်း တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကြပ်အတည်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ တိုင်းရင်း သားပြည်သူ အကျိုးကို ဦးတည်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရဲဝံ့စွာချမှတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း နှင့် ရပ်တန့်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှေ့ဆက်နိုင်ရေး အစိုးရသစ်အနေဖြင့် အထူးအလေးပေး ဆောင် ရွက်ရန်ကိုပါ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားသည်။ အလားတူ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်တစ်ရက် နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရ တပ်မ တော်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် တပ်မတော်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရှိလာပါက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးရာပြည့် ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%b1%e 1%80%94% e1%80%ac%e1%80
ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရသေးသည့် မြို့နယ်များတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပ ပေးရန်အတွက် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) က ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ကာတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ထိုထုတ် ပြန်ချက်၌ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အများစုမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ယင်းဒေသအတွင်း နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် မဲပေးခွင့် မရရှိခဲ့ကြဘဲ ပြည်သူ့အသံ ကိုယ်စားပြုနိုင်သော ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသကဲ့သို့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ နစ်နာခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
AA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ခိုင်သုခ က “အဓိကကတော့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ မဆုံးရှုံးရအောင် ရွေးကောက်ပွဲ ကို စောနိုင်သမျှ စောအောင် အမြန်ဆုံး ကျင်းပနိုင်လေ ကောင်းလေပေါ့ဗျာ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် မတိုင်ခင် ကျင်းပရင် ကောင်းတယ်လို့ ကျနော်တို့က အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ သို့သော်လည်း ဦးခိုင်သုခ က ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာထက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့် နိုင်ဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှူံး သည် ရခိုင်းတိုင်းရင်းသားများဘဝ အပြောင်း အလဲမဟုတ်ဘဲ ရခိုင်နိုင်ငံပြန်ရရေး တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကသာ မှန်ကန်သည့် နည်း လမ်းဖြစ်ကြောင်း လူမျိုးရေးကို တည်၍ လှုံ့ဆော် ရေးသား လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရသေး သော မြို့နယ်များ၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက် မတိုင်မီ ကျင်းပနိုင်ရန် NLD အစိုးရနှင့် တပ်မတော် တို့အား မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဟု ရေးသားထားသည်။
အဆိုပါနေရာများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ရန် မိမိတို့သည့် တဖက်သတ် အပစ်ရပ်စဲခြင်းအား နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် မှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့်လည်း ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်း ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေမှုများကို ရပ်တန့်ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ လွှမ်းခြုံသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကို ကြေညာကာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အမြန်ဆုံး ကျင်းပနိုင်ရေး NLD အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းလည်း ပါရှိသည်။ ထိုသို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် တည်ငြိမ်သော အခင်းအကျင်း အခြေအနေတခုကို ဖန်တီးရန် အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့နှင့် သင့်တော်သလို ပံ့ပိုးကူညီလုပ်ဆောင်သွားရန် ဆန္ဒရှိ ကြောင်းကို AA ၏ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/ 11/12/233303.html
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)တွင် ပါဝင်သည့် တောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဆန္ဒမဲ လာ ထည့်သူ အနည်းငယ်သာရှိပြီး တောင်ကလေးမဲရုံ ၃တွင် မဲလာထည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမရှိခဲ့ဟု မဲရုံတာဝန်ရှိသူ များထံမှ သိရသည်။ ကျိုက်ဒုံ၊ အဇင်းဒေသဘက် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် တောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုသည် ကရင်တိုင်းရင်း သား အများစုသာနေထိုင်ကြပြီး ကွီလုံးတိုင်၊ သပြု၊ ထီးတပလုခီး၊ လော်ပခီး၊ ဒူးပေါ်၊ တောင်ကလေး၊ ရွာကတော်၊ မော်တလွှာ၊ ကရကျသဲရွာ အပါအဝင် ရွာပေါင်း ၂ဝ ဝန်းကျင်ရှိကာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁,ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ကျေးရွာအများစုမှာ မဲရုံတည်ရှိ သည့်နေရာနှင့် အလှမ်းဝေးသည့်အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိသောကြောင့် အများစုမဲလာထည့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဟု ဒေသတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
တောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု မဲရုံမှူး စောလင်းထူးက “ကျနော်တို့မဲရုံ ၃ မှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၅၂၅ ယောက်ရှိတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်မှာ ကြိုတင်မဲ ၁ မဲပဲရတယ်။ အဲဒီမဲကလည်း ဒီမှာမဲရုံတာဝန်ကျသူတစ်ဦးက ထည့်တဲ့မဲပါ။ ရွာသားတွေ တစ်ယောက်မှ မဲလာထည့်တာမရှိဘူး။ သူတို့ရွာနဲ့ ဝေးတာလည်းပါမယ်၊ လမ်းပန်းခရီးဆက်သွယ်ရေး မကောင်းတာလည်းပါမယ်”ဟု ယနေ့ (နိုဝင် ဘာ ၁၁ ရက်)တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုများတွင် မဲရုံ ၃ ရုံထားရှိပြီး မဲရုံ ၁ တွင် ဆန္ဒမဲလာထည့်သူ ၁ဝဝ ကျော်၊ မဲရုံ ၂ တွင် ၂ဝ ကျော်နှင့် မဲရုံ ၃ တွင် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ကြိုတင်မဲ ၁ မဲသာ ရရှိပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၂ဝ ဝန်းကျင်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁,ဝဝဝ ကျော်ရှိသော် လည်း ဆန္ဒမဲလာထည့်ဦးရေ ၂ဝဝ ကျော်သာ ရှိခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲအများစုမှာ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ -KNDP၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း စောယှာဝေါ်မင်းနှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလောင်းများကို အများစု မဲထည့်ခဲ့ကြသည်ဟု မဲရုံတာဝန်သူထံမှ သိရသည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး မဲဆန္ဒနယ် (၁) နှင့် မဲဆန္ဒနယ် (၂) နေရာစလုံးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းများက မဲအသာစီး ဖြင့် အနိုင်ရရှိ သည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီတာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%81%be% e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%84%e1%80
ဒီဇင်ဘာလ မကုန်ခင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) ၏ တောင်းဆိုချက် ကို တပ်မတော်ဘက်က လက်ခံကြိုဆိုပြီး သဘောတူပါသည် ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံးကလည်း ယနေ့ည တွင် ထုတ်ပြန်ချက်တစောင် ထုတ်ကာ AA ဘက်မှ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို ကြိုဆိုပါသည်ဟု ပြောပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် နေရာများ၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားပါမည်ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။ တပ်မတော် သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက “ULA/ AA ဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တပ် မတော် အနေနဲ့ ကြိုဆိုတယ်။ သဘောတူတယ်။ ပြီးရင် အဲဒါတင် မကဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လုပ်ဖို့ ကျန်နေတဲ့ မိုင်းကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြဖို့ သဘောတူတယ်” ဟု ပြောသည်။
AA က ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ချက် တစောင်ထုတ်ခဲ့ပြီး ထိုထဲတွင် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်က အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် မကျင်းပခဲ့ရသည့် နယ်မြေများကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန် လည် ကျင်းပပေးရန် NLD အစိုးရနှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့အား မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းပါသည်ဟု ရေးသားထားသည်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်သည့် အခင်းအကျင်း အခြေ အနေ တခုကို ဖန်တီးရန်အတွက်လည်း နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့်အတူ သင့်တော်သလို ပံ့ပိုး ကူညီသွားရန်လည်း ဆန္ဒရှိပါသည်ဟု AA က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်း ရေးသားထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့နယ် အများစုတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့သဖြင့် ဒေသခံလူထုများက မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ပြည် သူ့အသံကို ကိုယ်စားပြုမည့် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖြင့် ဒေသခံများက နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများလည်း ဆုံးရှုံး နစ်နာရပါသည် ဟုလည်း AA က ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ရေးသား ထားသည်။
ဦးခိုင်သုခက “အဓိကကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက အတားအဆီး ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို အတားအဆီး လုပ်ထားတဲ့ သူတွေက ဖြေလျှော့ပေးလို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဒေသမှာ စစ်ဆင်ရေးတွေ ထိုးစစ်တွေ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကနေ ထိုးစစ်တွေကို ရပ်တန့်ပေးဖို့ လိုပါ တယ်။ တဖက်နဲ့တဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင် မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အစိုးရဘက်က လုပ်ထားတဲ့ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုနဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖြေလျှော့ပေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ”ဟုလည်းပြောသည်။ တပ်မတော်ဘက်မှ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို ဆောလျင်စွာ ကျင်းပပေးရန် ပြောဆိုထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပရေး၊ မကျင်းပရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ တစုံတရာပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါ။ https://burma.irraw addy.com/news/2020/11/12/233321.html
တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ ရည်မှန်းချက်များသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် တူညီ ကြသဖြင့် အနာဂတ်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ ဆန္ဒများကို အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု NLD ပါတီက ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်သည်။ NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့် နောင်အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရှေးရှုရမည့် ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စဟု အမည်တပ်ထားသော အဆိုပါကြေညာချက် ကို NLD ပါတီက နိုဝင်ဘာလ (၁၂ ) ရက်တွင် ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
NLD ပါတီအနေနှင့် မည်သည့် အခြေအနေကို ရောက်သည်ဖြစ်စေ နောင်အနာဂတ်၌ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် မမှိတ်မသုန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ကလည်း NLD ပါတီက ဖော်ဆောင်မည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးကို တက်တက် ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ဆိုထားသည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ကလည်း NLD ပါတီက ဖော်ဆောင်မည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးကို တက်တက် ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ဆိုထားသည်။ NLD က စာပေးပို့ထားသည့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီများထဲတွင် ပါဝင်သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (SNLD) ပါတီနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) တို့ကမူ အဆိုပါ စာသည် ၎င်းတို့ ပါတီထံသို့ မရောက်ရှိသေးသဖြင့် စာပါ အကြောင်းအရာများကို မသိသေးဟုဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့်အချက်ကိုမူ ယေဘူယျအား ဖြင့် ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြသည်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်က သမ္မတအိမ်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင်လည်း သမ္မတရုံးပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက၂၀၂၀ အလွန်တွင် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (National Unity Government) ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ပြောဆိုဖူးသည်။ https://burma.irrawad dy.com/election-2020/2020/11/12/233318.html
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၉ ၌ NLD ကိုယ်စားလှယ် နန်းမိုးမိုးထွေးက KNDP ကိုယ်စားလှယ် စောမြင့်ဟန်ကို ငါးမဲအသာဖြင့် အနိုင်ရသွားပြီး မြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ မဲရလဒ်အပေါ် ပြန်လည် စစ်ပေး ရန် KNDP က တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး NLD ကိုယ်စားလှယ် နန်းမိုးမိုးထွေးက ၂၀,၁၄၆ မဲ၊ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) ကိုယ်စားလှယ် စောမြင့်ဟန် က ၂၀,၁၄၁ မဲ၊ USDP ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဦး က ၁၃,၀၉၁ မဲ၊ ပြည် ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြတ်ကျော်က ၆၆၃ မဲ အသီးသီး ရရှိခဲ့ပြီး မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ထုတ်ပြန်သည့် မဲရလဒ်အား ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အသီးသီးကပုံစံ ၁၉ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မဲစာရင်းအကုန်လုံးကို ပြန်စစ်ပေးဖို့ ကော်မရှင်ကို တောင်းဆိုထားတယ်။ KNDP က ရှုံးသော်လည်းဘဲ ရိုးရိုးသားသား ရှုံးတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ တွင် NLD မှ စောချစ်ခင်က ၂၀,၄၉၉ မဲ၊ KNDP မှ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ၁၉,၁၂၉ မဲ၊ USDP မှ စောစိုးဝင်းက ၁၃,၀၇၆ မဲ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ် စောကျော်လွင်ဦးက ၁,၇၉၇ မဲ၊ UBP မှ ဦးအောင်ကိုဝင်းက ၆၉၈ မဲ အသီးသီးရရှိထားကြောင်း မြို့နယ်ရွေးကော်အဖွဲ့ခွဲ၏ မဲရလဒ် ပုံစံ ၁၉ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ “မဲရလဒ်တွေကတော့ ကျနော်တို့ ပုံစံ ၁၉ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲ့အတိုင်းပါပဲ လာကြည့် လို့ရပါတယ်” ဟု လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ညွန့်က ပြောသည်။ လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာများ ၌ မဲလာပေးသူများအနေဖြင့် မဲပေးမှုပုံစံကို သေသေချာချာ မသိသည့်အတွက် ပယ်မဲများသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် သူတစ် ဦးက ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%80%e1%80%9b %e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့နယ် ရှောက်ခြုံကျေးရွာအတွင်းသို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် ညနေ ၇ နာရီခန့်က လက်နက်ကြီးကျည် တလုံးကျရောက် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကလေး ၂ ဦးအပါအဝင် ရွာသား ၆ ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ရှောက်ခြုံကျေးရွာမှ ဒဏ်ရာရသူ ဒေါ်တင်မေနန်း၏ ယောက်မ တော်စပ်သူ ဒေါ်ချိုချိုသန်းက “ ကဇုကိုင်းဘက်ကနေ လက်နက်ကြီး ကျည် ၁ လုံးက ဦးဌေးဝင်း အိမ်ရှေ့က သစ်ပင်ကိုကျရောက် ပေါက်ကွဲပြီးတော့ ကျည်စတွေ လွင့်စင် ပြီးတော့ လာထိတာ။ အဲဒီမှာ တအိမ်တည်းက ၃ ယောက်က ထမင်းစားဖို့ ဆိုပြီးတော့ လုပ်နေရင်းထိမှန်တာ။ တခြား နေအိမ်က ၁ ယေက်အပြင် လမ်းမှာ သွားနေသူ ၂ ယောက်တို့မှာလည်း ကျည်စတွေ ထိမှန်ပြီးတော့ ဒဏ်ရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ကြတာ ” ဟု ပြောသည်။ နံနက်ပိုင်းတွင်မူ ရှောက်ခြုံကျေးရွာနှင့် ၅ ဖာလုံအကွာအဝေးတွင် တပ်မတော်နှင့် AA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ကျည်စထိမှန်မှုကြောင့် အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မတိုးတိုးတွင် ဘယ်ခြေထောက်၊ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မောင်လင်း လင်းချေတွင် ကျောကုန်းနှင့် ညာဘက် လက်မောင်း၊ ၊ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မောင်မောင်တွင် ညာဘက်ဘေးစ၊ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကိုလှမင်းတွင် ဦးခေါင်းနှင့် ညာတင်ပါး၊ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ဒေါ်တင်မေနန်းတွင် ခြေထောက်ဒူးဆစ် နှစ် ဘက်စလုံးနှင့် ၅၄ နှစ်အရွယ် ဦးခင်မောင်တွင် ခါးဆစ်နှင့် ညာဘက်ပေါင်တို့တွင် ဒဏ်ရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းလူနာများကို လက်ရှိတွင် မြေပုံမြို့နယ်၊ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုမှုခံယူနေရပြီး လက်ရှိတွင် ယင်း အထဲ မှ ၃ ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သည့် အတွက် စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်နေကြောင်းလည်း ကမ်းထောင်းကြီးဒေသခံများ ထံမှ သိရသည်။ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဦးဝင်းလှအောင်က “ ခါးဆစ်မှာ ဒဏ်ရာသူ ဦးခင်မောင်နဲ့ တင်မေနန်းမှာ ခြေထောက် ဒူးဆစ်ကျိုးသွာတဲ့ ပုံပေါက်နေပြီး ကျန်ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သူ စုစုပေါင်း ၃ ဦးကို စစ်တွေမှာ ကုသဖို့လိုအပ်မယ်။ ကျန် ၃ ယောက်ကိုတော့ ကမ်းထောင်းကြီး ဆေးရုံမှာ ကုသလို့ ရမယ် ” ဟုပြောသည်။
အမ်းမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဌေး က “ ဒေသခံ ၆ ဦးဒဏ်ရာရတာကို သတင်းကြားတယ်။ ကျနော် မနေ့က စစ်တွေကို လာတုန်းကတော့ ကားလမ်းမထက် ခြောက်ခြုံနဲ့ ကဇုကိုင်း တံတားနားတွေမှာ တပ်မတော်သား တွေ ဟိုတစု ဒီတစုတော့တွေ့ခဲ့ ရတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ မဖြစ်နဲ့ အဲဒီကိစ္စ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျနော်လည်း မပြောနိုင်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။ အမ်းမြို့ခံ ကိုမျိုးလွင်က “ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာတွေကို လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန် အောင်လှမ်းပစ်မှုတွေဟာ ကျေးရွာသားတွေရဲ့ အသက်လုံခြုံမှုကို အလွန်တရာ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေထိုင်ရင်းနဲ့ အကာအကွယ် မဲ့နေကြရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ ” ဟု ဆိုသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news /2020/11/11/233242.html
မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့အနီးက ကျေးရွာတွေကို TNLA တအာင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စစ်ကြောင်းတွေက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မှာ စတင် ရောက်ရှိလာပြီး ရွာအတွင်း ယာယီစခန်းချကာ ရိက္ခာနဲ့ ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဒေသခံရွာသားတွေ မိုးကုတ်မြို့ထဲကို တိမ်းရှောင်လာကြတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေ ဒေသခံတွေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“TNLA တပ်ဖွဲ့တွေ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်အလို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က စရောက်လာတဲ့ သူတို့ရောက်နေတဲ့ ရွာတွေမှာ ရိက္ခာတောင်းတယ်။ ကျောက်လုပ်ကွက်တွေကိုလည်း ဆပ်ကြေးတောင်းတယ်။ ပြီးတော့ မိုးကုတ်မြို့အတွင်း က လောင်းကစားဒိုင်အမျိုးသမီးကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီး လူနှစ်ယောက်နဲ့ အဓမ္မလာဖမ်းခေါ်သွားပြီး သိန်း ၅၀၀ နဲ့ ပြန်ရွေးခိုင်း တယ်။ သိန်း ၂၅၀ နဲ့ ပေးလိုက်မှ ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ မြို့အတွင်းလည်း ဆပ်ကြေးတွေ လိုက်ကောက်နေ တယ်”လို့ ဒေသခံ ကိုမင်းမင်း ကပြောပါတယ်။ TNLA တအာင်းတပ်တွေ ရောက်ရှိလာပြီး ယာယီစခန်းချနေတဲ့ ကျေးရွာတွေကတော့ ပိန်းပြစ်အထက်ရွာ၊ ပိန်းပြစ်အောက်ရွာ၊ ချောင်းကြီးကုန်းစံရွာ၊ ချောင်း ကြီးကျောက်ဝါရွာ၊ ချောင်းကြီးမာနားအလယ်ရွာ၊ ချောင်းကြီးကုန်းစံရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျေးရွာတွေက ပြည်သူတွေဟာ စိုးရိမ်းထိတ်လန့်ပြီး မိုးကုတ်မြို့ထဲကို တိမ်းရှောင် နေကြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ မိုးကုတ်ဒေသဟာ အဖြူရောင်နယ်မြေပါ။ ဒီလို TNLA စစ်ကြောင်းလာတာမရှိခဲ့ဘူးဗျ။ ဆပ်ကြေးကောက် ရိက္ခာတောင်းတာလည်း မကြုံဖူးဘူး။ ဒီတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီး မြို့ထဲက အမျိုးအိမ်တွေမှာ လာနေကြတာပါ။ မကြောက် တဲ့သူတွေကတော့ မတိမ်းရှောင်ဘဲရွာမှာ နေနေကြတာလည်းရှိ တယ်။” လို့လည်း ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ TNLA တအာင်းတပ်ဖွဲ့က မြို့အတွင်းဝင်ရောက်ပြီး ငွေကြေးကောက်ခံတာ အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေ ရှိနေတာကြောင့် မိုးကုတ်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထုတွေလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စိတ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး TNLA တအာင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပြန်ကြားဌာနမှူး ဗိုလ်မှူးတာအိုက်ကျော်ကို ဆက်သွယ် အတည်ပြုဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ http://burm ese.dvb.no/archives/423328
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီများရှုံးနှိမ့်ခဲ့သည့်အချက်များအနက် သတင်းတုသတင်းမှားဖြင့် ပြောဆို တိုက်ခိုက်ခံရမှုသည် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ၏ ဒု-ဥက္ကဌ ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောဆိုခဲ့ သည်။“ကျမတို့စည်းရုံးရေးကာလ ပြီးဆုံးချိန်လောက်မှာ အများကြီးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါက USDP နဲ့ ချိတ်ဆက်ထား တယ်ပေါ့။ အဲ့ကရတဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ စည်းရုံးရေလုပ်ကြတယ်။ အဲ့လိုတွေလိုက်ပြောပြီး မဲဆွယ်တော့ အောက်ခြေက လူတန်း စားတွေက နားလည် ပေးဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ မဲ မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်က ရှိသွားတယ်။ အဲဒါက လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ ပိုဆိုးတယ်။ စည်းရုံးရေးမှာတွေ့တဲ့လူတိုင်းနဲ့ဖြေရှင်းရတယ်။ နောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတာက တစ်ချက် တည်း မဟုတ်ဘူး။ ပူတာအိုလို USDP အားကောင်းတဲ့ ဒေသမှာဆိုရင် ကေအိုင်ကေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောဆိုခံရတယ်။ ဒါကြောင့် အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာ ခက်အောင်က ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီတစ်ပတ်ခန့်အလို ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် ခရီးစဉ် အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ – KSPP က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့မည့် ပါတီဖြစ်သည်ဟု ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့မှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ကို ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်မှုများစွာလည်း ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ခက်အောင်က USDP နဲ့ KSPP ပတ်သက်နေသည့် အကြောင်းများကို ပြောဆိုမှုမရှိခဲ့ သလို မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ရာတွင်လည်း “KSPP ကိုမဲထည့်ရင်ဘာအကျိုးရလဒ်ရမလဲ။ NLD ကိုမဲထည့်ရင်ဘာအကျိုးခံစားခွင့် ရမလဲ။ USDP ကိုမဲထည့်ရင် မင်းတို့အတွက် ဘာရမလဲ” စသောအချက်များသာ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ကြိုတင်မဲလာထည့်ရာတွင် မီဒီယာများကို ဖြေကြားခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP က ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ၃ နေရာနှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အတွက် ၁ နေရာသာ အနိုင်ရခဲ့သည်။ https://burmese.Kachinnews.com/2020/11/1 0/%e1%80%9e %e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1
နိုဝင်ဘာ (၈) ရက် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် အစိုးရ တပ်မတော်သည် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ( RCSS/SSA) လှုပ်ရှားရာ နယ်မြေသို့ စစ်အင်အားဖြည့် လှုပ်ရှားနေ ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံ၊ နမ့်စန်၊ လင်းခေး၊ ကျိုင်းတောင်း ဒေသများသို့ အစိုးရတပ်မတော် စစ်အင်အား ဖြည့်ဆည်းနေ သည့်အပေါ် ပြည်သူများစိုးရိမ်နေကြောင်း လည်း RCSS/SSA သတင်းဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် Tai Freedom တွင် ရေးသားထား သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က “ သတင်းကိုတော့ ကျနော်တို့ကြားနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်တော့ ကျနော်တို့မသိရှိရသေးဘူး”ဟု သျှမ်းသံ တော်ဆင့်ကိုပြောသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားသော်လည်း ဒေသခံ ပြည်သူများအနေဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား မည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း လည်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် ကလည်း လင်းခေးခရိုင်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ မိုင်းပန်မြို့နယ်သို့ မဲရုံဝန်ထမ်းနှင့် မဲရုံ ပစ္စည်းများ သွားပို့ဆောင်ပြီး အပြန်လမ်းတွင် RCSS/SSA မှ အဆိုပါယာဉ်ကို ပစ်ခတ်ရာ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်အရာရှိ တို့ကျည်ဆံထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ RCSS/SSA သည် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီစာချုပ် (NCA) လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်မှာ (၅)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ https://burmese.shan news.org/archives/19440
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် မြစ်ကြီးနား-ဗန်မော် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ တိုက်ပွဲကြောင့် ၁၀နှစ်ခန့်စွန့်ခွာထားသည့် ဒဘတ်ယာန်ကျေးရွာတွင် နေရပ်ပြန်အခြေချနိုင်ရန်အတွက် ဒေသခံစစ်မှန်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဟု သိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး(လ.ဝ.က)၊ မြေစာရင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ ကချင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့(KHCC) တို့က ဒဘတ်ယာန်ကျေးရွာသို့သွားရောက်စစ်ဆေးကာ နေရပ်ပြန်မည့် စစ်ရှောင်များ၏ အမည်စာရင်းများ ကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြစ်ကြီးနားနှင့်ဝိုင်းမော်မြို့အတွင်းရှိ နေရပ်ပြန်မည့် ဒေသခံ အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ကျော်ကလည်း အမည်စာရင်း သွားရောက်ပေးသွင်းနေကြပြီဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် လုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်း မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း စတင်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း KHCC မှ ဆရာခါးလီက ယခုလိုပြောဆိုသည်။“ဒီနေ့ကတော့ အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ နေရပ်ပြန်နိုင်ပြီလို့ တက်ရောက်သွား အောင် ဒဘတ်ယာန်ကျေးရွာမှာဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူ စစ်ရှောင်တွေရဲ့ နေရပ်ပြန်မယ့် အမည်စားရင်းတွေ ကောက်ခံခဲ့တဲ့သဘောပါ။ မနက်ဖြန်မှစ၍ စစ်ရှောင်တွေရဲ့အိမ်ခြံဝန်းတွေစီစစ်မယ်။ ပြီးရင်မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေ စလုပ်တော့ မည်ဖြစ်တယ်။ တခြားစစ်ရှောင်နေရာ တွင်မှာလည်း လုပ်ကိုင်နေတာရှိတဲ့အတွက် ဒီမှာ မိုင်းရှင်းလင်းရေးက ၁ ပတ် လောက်ကြာမယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။“စီစစ်မယ်၊ မိုင်းရှင်းလင်းအပြီးက ဒီလ ၂၅ ရက်နောက်အကျဆုံး သတ်မှတ်ထား တယ်။ ဒါပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ လာမယ့် ဖေဖဝါရီလ ကုန်ပိုင်းတော့ အကုန် ပြီးစီး အောင်မျှော်လင့်ထားတယ်။ ပြီးမှ စစ်ရှောင်တွေနေရပ်ပြန်နိုင်ပါပြီ”ဟု ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကျေးရွာအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စု ၃၇ စုကိုအရင်စရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ ပြီးမှ နောက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေပြောတဲ့အတိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနဲ့ကျောင်းစာသင်ကျောင်းတွေ စရှိသဖြင့် အစိုးရအဆောက်အုံ တွေကို ပြန်ရှင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပြီးမှသာ ဒေသခံတွေနေတဲ့ နေအိမ်အဆောက်အဦးတွေကို ပြန်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ တစ်ရက်ကို အိမ်ထောင်စု အများဆုံး ၆ ခုလောက်ရှင်းပေးသွားမယ်ဖြစ်တယ်”ဟု မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့မှ တပ်မတော်အရာရှိ တစ်ဦးက စစ်ရှောင်များ ကို ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ နေရပ်ပြန်မည့် ဒဘတ်ယာန်စစ်ရှောင်ပြည်သူများက လက်ရှိတွင်မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့ရှိ စစ်ရှောင်စန်း ၁၇ခုတွင် ခိုလှုံနေသူများဖြစ်ကာ လူဦးရေ ၇၀၀ ကျော်နှင့် အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ KHCC သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံမှုနှင့် နေရပ်ပြန်သင့်သည့် ကျေးရွာ ၁၇ ခု ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး လက်ရှိတွင် ရွှေညောင်ပင် ကျေးရွာတစ်ခုတည်းသာ နေရပ်ပြန်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် တဖက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးပေ။ https://burmese.kachinn ews.com/2020 /11/12/l2-25/
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဟောင်း ဦးလင်းဇော်ထွန်းအပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ အနိုင်ရရှိခဲ့သော မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က မဲဆန္ဒရှင်များကို ရွာလုံး ကျွတ် ကားအကြိုအပို့လုပ်၍ မဲထည့်ခိုင်းမှုများရှိခဲ့ကြောင်း မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော SNLD ၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကျဖေ့က ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ အပါအဝင် ကြိုတင်မဲများ ကောက်ယူရာတွင် မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်မှုများကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ဦးကျဖေ့က ဆိုသည်။“တချို့မဲရုံတွေမှာ ကော်မရှင်ဥပဒေနဲ့ တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့မဲရုံကျတော့ မဲရုံမှူးကိုယ်တိုင်က ဒါထုပါ၊ ဒါထည့်ပါဆိုပြီး ဆန္ဒပြုခန်းအထိသွားပြီးမှ တစ်ဦးချင်းလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ နောက်တချို့မဲရုံကျတော့ ဆန္ဒပြုခန်းက လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုခန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ အများ ပြည်သူ လူလာတဲ့ဘက်ကို လှည့်ထားတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်။ နောက် မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုက်စစ်မှုးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေက ကျေးရွာသားတွေကို သူတို့ပါတီကို မဲပေးရမယ်ဆိုပြီး ကားအကြိုအပို့ လုပ်ပေးနေတယ်။ တစ်ရွာပြီးတစ်ရွာလေ။ သူတို့က ကြံ့ခိုင်ရေးပေါ့”ဟု ဦးကျဖေ့က ရှင်းပြသည်။ ဦးကျဖေ့က လတ်တလော ရွေးကောက်ပွဲတွင် မသာမှုများလုပ်ဆောင်သော အထောက်အထားများကို စုဆောင်းလျက်ရှိပြီး SNLD ပါတီနှင့်တိုင်ပင်ကာ ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ မကြာမီတိုင်ကြားမှုများလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဖြတ် မြို့နယ်တွင် နမ့်ယွန်း ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ တစ်ခု အခြေ စိုက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။
မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ တပ်ချုပ်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဟောင်းလည်းဖြစ် ဗိုလ်မှူးဟောင်းလည်းဖြစ် ဦးလင်းဇော်ထွန်း က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးညွန့်ဝင်း က မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးဖရန်စစ်ကိုစ် အမှတ် ၂ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/11/%e1%80%90%e1%80 %95% e1%80%ba%e1%80%81%e1%80
မြေမြှုပ်မိုင်းဗုံးတွေကို သူပုန်အုပ်စုတွေက အသုံးပြုမှုတွေ များပြားလာတာနဲ့ စစ်ပွဲလက်ကျန် ပေါက်ကွဲရေး ပစ္စည်းတွေ ကြောင့် အရပ်သားတွေ သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိမှုနှုန်း ပိုများလာတယ်လို့ မြေမြှုပ်ဗုံးအသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ Landmine Monitor အဖွဲ့ ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၉ ခုနှစ် မြေမြှုပ်မိုင်းဗုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ဟာ အောင် မြင်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း Landmine Monitor အဖွဲ့ က ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၄ နိုင်ငံက မြေမြှုပ်မိုင်း ထုတ်လုပ်၊ သိုလှောင်၊ အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဒီစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထား တာပါ။ ဒါ့အပြင်စာချုပ် ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမထားတဲ့ နိုင်ငံ ၃၃ နိုင်ငံကလည်း လိုက်နာမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေး မထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမှာသာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်လယ်က ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ လအထိ မြေမြှုပ်ဗုံး အသုံးပြုမှုကို တွေ့ရှိရတယ်လို့ အစီရင်ခံထားတာပါ။
အဲဒီ ကာလအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မြေမြှုပ်ဗုံးတွေကြောင့် သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူ ခန့်မှန်းခြေ အယောက် ၅,၅၀၀ ထဲက ၂,၂၀၀ အသက် သေဆုံးရပြီး လူ ၃,၃၅၇ ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ Landmine Monitor ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Lorne Persi က VOA ကိုပြော ပါတယ်။ “သေဆုံးသူနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသူ အချိုးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒဏ်ရာရသူ ဦးရေက အဆမတန် များ ပြားတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ မြင်နိုင်ကြောင်း၊မြေမြှုပ်မိုင်းနဲ့ စစ်ပွဲလက်ကျန် ပေါက်ကွဲစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို အပြည့်အဝမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း” Landmine Monitor အဖွဲ့က သုတေသနပညာ ရှင် Persi က ပြောပါတယ်။ မြေမြှုပ်မိုင်း ပိတ်ပင်တဲ့ စာချုပ် အသက်ဝင်ကတည်းက စာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ သိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လူထောင် မြေမြှုပ် မိုင်း ၅၅ သန်းကျော်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး မိုင်းရှင်းလင်း ဖျက်ဆီးရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ လည်း တိုးတက်မှုတွေ ရရှိနေတယ်လို့လည်း Landmine Monitor က အစီရင်ခံထားပါတယ်။ https://burmese.voanew s.com/a/myanmar-landmine-monitor-report-/5659202.html
၁၅။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အန်အယ်လ်ဒီအပါအဝင် အားလုံးနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ပြော
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေအပါအဝင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်စုတစ်ဖွဲ့တည်းမပြင်နိုင်တာမို့ အန်အယ်လ်ဒီ အပါအဝင် အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက် အနိုင်ရရှိခဲ့သူ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုးက ပြောပါ တယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“တကယ်တမ်းတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ရမယ်၊ အခြေခံဥပဒေက တကယ့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပုံစံ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်အောင် ဒါကို ကျနောတို့ ပြင်ရမယ်၊ အဲ့လိုပြင်တဲ့နေရာမှာ တစ်စုတစ်ဖွဲ့တည်း မပြင်နိုင်ဘူး၊ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီထဲလည်း မပြင်နိုင်ဘူး၊ ဒါ သေချာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေစုပေါင်း ပြီး ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါလည်း မပြင်နိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားပါတီများ အားလုံး အန်အယ်လ်ဒီပါတီနဲ့ အခြား ပြည်ထောင်စု အဆင့်ရှိတဲ့ပါတီများနဲ့ အားလုံး ပူးပေါင်းရမယ်၊ ညှိနှိုင်းရမယ်၊ တပ်မတော် အဓိက အရေးကြီးတယ်၊ တပ်မတော်ကိုလည်း ညှိနှိုင်းရမယ်၊ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့မရဘူး” လို့ ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုးက ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးလွင်ကတော့ “တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ပါတီအနိုင်ရဖို့ ကိုယ့် နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ကြိုးစားကြတယ်၊ အနိုင်ရရင်တက်လာတဲ့ အစိုးရ ဆိုတာရှိတယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက တက်လာတဲ့ အစိုးရက ကိုယ့်အစိုးရဆိုပြီးတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင် တိုင်းပြည် တိုးတက်မှာပါ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် ဝိုင်းလုပ်ကြရမှာပါ၊ နိုင်ငံရေးမှာ ထာဝရရန်သူ ထာဝရမိတ်ဆွေဆိုတာ မရှိပါဘူး ” လို့ သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရေးမြို့နယ်အတွင်းယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ ကျေးရွာတွေက ဆန္ဒမဲအများစုနဲ့ ကိုယ်စား လှယ် ၅ နေရာလုံးမှာ နေရာပြည့် အနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/423691
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့၏ လီဆူ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး၂ နေရာကို လီဆူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (LNDP) မှ အနိုင် ရရှိသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ LNDP ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမင်း (ခ) ဦးဆီဖာလာလူးသည် ကချင်ပြည်နယ်၏ လီဆူ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နေရာ၊ ဦးဂူဆာက ရှမ်းပြည်နယ်၏ လီဆူတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာတွင် NLD ပါတီကို မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် ကျော်တက် ကာ အနိုင် ရရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးရွှေမင်းက “ကျနော်က မဲ၂ သောင်းကျော် ရထားတာပါ။ NLD ထက် မဲပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော် များပါတယ်။ ဦးဂူဆာ က တော့ မဲ ၁၀၀၀ ကျော်လောက် အသာစီး ရထားတာလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ ဦးရွှေမင်းနှင့် ဦးဂူဆာ၏ မဲရလဒ်များမှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) မှ အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသေး သော်လည်း မဲရုံများမှ မဲရလဒ်များကို ရေတွက်ပြီးသည့် ရလဒ် အပေါ်တွင် အနိုင်အရှုံး တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) ၏ ပြည်နယ် အောင်နိုင်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဗိုလ်ကလည်း ကချင်ပြည်နယ်၏ လီဆူတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာတွင် NLD က ရှုံးပြီး ဦးရွှေမင်းက အနိုင်ရသွားပြီဟု အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။ ဦးရွှေမင်းက “ကျနော်တို့က ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုးသားရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ လီဆူအမျိုး သား ပါတီပဲ ဖြစ်တယ်။ မိခင်ပါတီ အနိုင်ရတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီရဲ့ အမျိုးသားရေး လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အားက ကျနော်တို့ လူမျိုးထဲမှာ အရေးပါဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ရတာလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြော သည်။ LNDP မှ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်၂၉ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ၂ နေရာနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၁) တွင်သာ အနိုင်ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/11/10/233191.html
တနိုင်ငံလုံးရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသည်အထိ ဆွေးနွေးရန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့် အမြဲတမ်းကော်မတီ ၁ ခုကို တပ်မတော်က နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက “ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်ပြီးဆုံးသည် အထိ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်လို့ တပ်မတော်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဖွဲ့လိုက်တဲ့ Permanent (အမြဲတမ်း) အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းကိုပဲ အာရုံစိုက်လုပ်နိုင်အောင်လို့ Permanent ဖွဲ့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီ၏အမည်မှာ တပ်မတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီ ဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေးတို့ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်မောင်ဝင်းနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်တို့မှာ ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်း ကော်မတီတွင် ပါဝင်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှာ အစိုးရ ဦးဆောင်နေသည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRPC)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်(PC) တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု တပ်မတော်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စား လှယ်များ အနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေး နေကြသူများ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း က “သူက ၃ ခုလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်။ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သား တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပိုမိုခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်။ လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေလည်း NCA လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့လည်း ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆွေးနွေးသွားမယ့် Permanent အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟုလည်း ပြောသည်။ တပ်မတော်နှင့် စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်သည့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် စဉ်းစားချက် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက အားလုံးအကျုံးဝင်ပါကြောင်း၊ အားလုံး နှင့် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပါသည်ဟု ဖြေဆိုသည်။ NCA ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း လိုအပ်လာပါက တပ်မတော်၏ ညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့က NCA သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်များအတိုင်း ၁ ဖွဲ့ချင်း ဆွေးနွေးပေး မည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယခုအခါ အမြဲတမ်းကော်မတီတရပ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်က ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့မှာ ပျက်ပြယ်သွားပြီဟုလည်း တပ်မတော်ထံမှ သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.c om/news/2020/11/11/233245.html
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် အမြင့်ကျွန်း ကျေးရွာ၌ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်က ကြိုတင်ပေးရာ မဲစာရွက်တွင် တံဆိပ်တုံး ရိုက်ပြီးသား မဲအချို့ပါသဖြင့် မဲပေးသူနှင့် မဲရုံတာဝန်ရှိသူတို့ကြား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်စဉ်အတွက် ရပ်ကျေး တာဝန်ရှိ သူတို့ကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူရန် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးသူရိန်ထွဋ်က “အဲဒီမှာ သူတို့ဘက်ကလည်း အား နည်းချက် ရှိခဲ့တယ်။ ဒီအားနည်းချက်ကို အခြေအနေ တခု စောင့်ကြည့်ပြီး ဥပဒေကြောင်းနဲ့အညီ အရေးယူမှုတွေ ပြု လုပ်ပေးဖို့ လုပ်နေတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ တခုခု လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမြင့်ကျွန်းကျေးရွာတွင် ကြိုတင်မဲပေးရာ၌ မဲမပေးရသေးသည့် မဲစာရွက် ၁၅ ရွက်တွင် ရခိုင့် ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇော်ကိုကိုလင်း နေရာ၌ ကြိုတင်ပြီး မဲတံဆိပ်တုံး ရိုက်နှိပ်ထားခဲ့သည့် အတွက် ကြိုတင်မဲပေးခဲ့သူဦးရေ ၃၀၀ ကျော်၏ မဲများကို ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်း၊ ယင်းကျေးရွာရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကိုလည်း တာဝန်မှ ရပ်ထားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံသာအောင်က “ကျနော်တို့ စိစစ်ကြည့်တော့ ရပ်ကျေးရွေး ကော် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အတွင်းရေးမှူးတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့လျော့မှုပါတယ်။ ဒါကို ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီက သဘော ထားအရ သူတို့ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး တာဝန်ကရပ်စဲခဲ့ပြီးတော့ နောက်လူတွေကို အသစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိမှာ သူတို့တွေကိုကျတော့ ပြည်ထောင်စုရွေးကော်ရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းထားတယ်”ဟု ဆိုသည်။ https://bu rma.irrawaddy.com/election-2020/2020/11/10/233172.html
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဟိုးပုံးမြို့နယ်တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ( PNO )ပါတီ ၃နေရာ အနိုင်ရရှိထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်တွင် ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခမ်းဝါ၊ ပြည်နယ် ၁တွင် ဦးခွန်မောင်ဖြူ နှင့် ပြည်နယ် ၂ တွင် ဦးခွန်စံလင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာတွင်မသိရှိရသေးကြောင်းသိရ သည်။“အမျိုးသားလွှတ်တော် ကတော့ မသိရသေးဘူး။ သူက ဟိုးပုံ၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း တို့ကိုပေါင်းရမှာဆိုတော့ အခု တော့ မသိရသေးဘူး”ဟု ဟိုပုံးမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်း အတွင်းရေးမှူးး ဦးအောင်ကျော်သူက ပြောသည်။
ပြည်သူကိုယ်စားလှယ် နှင့် ပြည်နယ် ၁ နင့် ၂ တို့တွင် အနိုင်ရရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်း မှ တရားဝင်း ထုတ်ပြန်ကြောညာထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19422
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ မေယုမြစ်အတွင်း ရေကြောင်းသွားလာခွင့်ကို တပ်မတော်က ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွက် ဒေသခံတွေ အခက်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် ကိုနိုင်ကွန်းအိန်က ပြောပြပေးပါ မယ်။
စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးနေဆဲ ရသေ့တောင်မြို့နယ်က မေယုမြစ်ထဲမှာ ရေကြောင်းသွားလာမှုတွေကို တပ်မတော်က ကန့်သတ်စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် သွားရေး၊ လာရေး အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အဓိက ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတခုဖြစ်တဲ့ ရေကြောင်းခရီးမှာ အကန့်အသတ်တွေကြုံနေရတာ တလကျော်လောက် ရှိနေပြီလို့လည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် စေတီပြင်ကျေးရွာက ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။“ရသေ့တောင်ကနေ ပိတ်ဆို့ ထားလိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒါ တပ်မတော်ရေကလေ။ အခုဆိုရင်တလကျော်လာပြီ။ မေယုမြစ်ပေါ် ပိတ်ထားတော့ ရသေ့တောင် မြို့နယ် မြောက်ဘက်ပိုင်းနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ရေလမ်းခရီးတွေပိတ်သွားတာပေါ့။”ရေကြောင်းသွားလာမှုကို ကန့်သတ် ထားတဲ့အတွက် ရသေ့တောင်နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွေမှာ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေ ကျဆင်းလာရာက ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့် မှုဒဏ် ခံနေရတယ်လို့လည်း ဘူးသီးတောင်မြို့ခံ ကိုဝင်းနိုင် ကပြောပါတယ်။
ရေကြောင်းခရီး အသွားအလာတွေ ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု ပြဿနာအပြင် ကျန်းမာရေးကိစ္စလို အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေမှာလည်း အခက်အခဲ တွေ့နေတယ်လို့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ခွဆုံရွာသူမခင်မျိုးအေးက ပြောပါ တယ်။“အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် ကြက်သွန်နီ တပိဿကို ၁,၂၀၀၊ ၁,၃၀၀။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ၁,၆၀၀ ဖြစ်နေပြီ။ ပြီးလို့ရှိရင် သင်္ဘော တွေ၊ ဘုတ်တွေ မသွားရတော့ စားရသောက်ရအခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်… ဒေသခံတွေက။ ကျန်းမာရေးကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ ဘုတ်တွေ၊ သင်္ဘောတွေ သွားလို့မရတဲ့အခါ ကလေးမွေးမိခင်တွေ နေမကောင်းတဲ့လူနာတွေ အခုမှာအခက်ခဲ ဖြစ်နေပါတယ်။”ရေကြောင်းသွားလာမှုတွေကို ကန့်သတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ တပ်မတော်ဘက်ကတော့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာ မရှိသလို၊ အခြေအနေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရအောင် မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားရမှာလည်း ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/56 57877.html
နှင်းဆီပါတီ ခေါ် ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်(ခ) မိုက်ကယ်ဟွားဟူအား ထောင်ပြေးမှု ပုဒ်မ ၂၂၄ ဖြင့် ချုပ်ရက်ခံစားခွင့်မရှိဘဲ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကျခံစေရန် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တရားရုံးက ယနေ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် ပုဒ်မ ၅(ည)၊ ပုဒ်မ ၁၈၉ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်ချမှတ်ခံရသည် ဦးကျော်မြင့်သည် တနှစ်ခန့်အကြာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် မန္တလေးထောင်မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ယနေ့ချမှတ်လိုက်သည့် ပြစ်ဒဏ်အပြင် ယခင်ပြစ်မှုကြွေး ကျန်များလည်း ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် ၎င်းအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃(၁) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုကိုလည်း လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် စွဲချက်တင်မတင် အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၂၄ ဖြင့် ပြစ်မှုထင် ရှားပါက ကျူးလွန်သူအား ၂ နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်တမျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ဟု ပြဌာန်းထားပြီး ကျူးလွန်သူအနေဖြင့် ပြစ်မှုကြွေးကျန်များ လည်း ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com /news/short-news/2020/11/12/233261.html
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ မဲဆန္ဒနယ် (၇) ခုမှာ အနိုင်ရရှိထားတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ပူတာအိုခရိုင်မှာ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အဖြေရလဒ်ကို ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဘက်က ကြေညာခြင်း မရှိသော်လည်း ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းက မဲဆန္ဒနယ် ၇ ခုမှာ ပြည်ထောင်စုံ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက အနိုင်ရရှိထားပြီလို့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူ‌တွေက ဆိုပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အနိုင်ရရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေက ပူတာအိုခရိုင်အမှတ်(၁) အမျိုးလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (နောင်မွန်မြို့ နယ်)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (ဆွမ်ဘရာဘွမ်မြို့နယ်)၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် (ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်)၊ အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်(နောင်မွန်မြို့နယ်)၊ အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် (ဆွမ်ဘရာဘွမ်မြို့နယ်)၊ အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွတ်တော် (ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်) စတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ အနိုင်ရရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းမှာ မြို့နယ် ၅ ခုရှိပြီး ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မချမ်းဘော့မြို့နယ်တို့မှာ အန်အယ်လ်ဒီက အနိုင်ရရှိပြီး အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွတ်တော် (ဆွမ်ဘရာဘွမ်မြို့နယ်) မှာ ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ၊ နောင်မွန်မြို့နယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မှာ အန်အယ်လ်ဒီ၊ အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်မှာ ဒူးလေးပါတီ (လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ) တို့က အသီးသီး အနိုင်ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burm ese.dvb.no/archives/423508
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မပါဝင်ခဲ့သော မဲဆန္ဒနယ်မြေများ၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျင်းပရန် ဥရောပသမဂ္ဂက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံပါဝင်သည့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယင်းသို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြား ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခွင့်ရသည့် နယ်မြေများတွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမူဘောင်အား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အထများနှင့်အညီ မွမ်းမံပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားသည်။
“အမှန်တကယ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က ညှိနှိုင်းပြီးတော့ အေအေအဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုသွားနိုင်အောင် သဘောတူညီချက်တစ်ခု မလုပ်ရင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက လုပ်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး”ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့သည့် နယ်မြေများတွင် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပ/မကျင်းပသည်မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ရခိုင်မျိုးသားပါတီ(ANP)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါ်အေးနုစိန်ကပြောသည်။ “ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့၊ မလုပ်ဖို့ အဆုံးအဖြတ်ဟာ တပ်မတော် က အကြံပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးသည်ဖြစ်စေ UEC ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်” ဟု ဒေါ်အေးနုစိန်က ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်ဖြစ်သည့် စစ်တွေ၊ အမ်း၊ တောင်ကုတ်၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ ဂွ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ မြို့နယ်တို့တွင် ရခိုင်မျိုးသားပါတီ(ANP)မှ လွှတ်တော်နေရာအများစုကို အနိုင်ရရှိ ထားကြောင်း ယင်းပါတီထံမှ သိရသည်။ https://www.bnio nline.net/mm/news-76885
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အစိုးရသစ်တစ်ရပ်တက်လာရင် လွိုင်ကော်မြို့နယ် စက်မှုဇုန်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ အကြီးစား ခဲသတ္တုစက်ရုံကို တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့အတွက် သတိပေးနိုးဆော်သွားမယ်လို့ ကရင်နီ အကြီးစားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစီမံကိန်း စောင့်ကြည့် ရေးကွန်ရက်အဖွဲ့က အစီရင်ခံစာတွေ၊ စာအုပ်တွေ စတင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိနေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) စနစ်၊ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) တွေ မချပြနိုင်သေးခင်မှာပဲ လွိုင်ကော်မြို့နယ် နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စုထဲက စက်မှုဇုန်မှာ ခဲသတ္တုသန့်စင် စက်ရုံကိုတည်ဆောက် နေတဲ့အပေါ်မှာ အစိုးရကနေ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အပေါ် အခုလို တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက် ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်နီ အကြီးစားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစီမံကိန်း စောင့်ကြည့် ရေးကွန်ရက်(KMIW) စောအယ်စေးက “ ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးကို ဒီနောက် တက်လာမယ့် အစိုးရသော်လည်းကောင်း၊ ကျနော်တို့ အစိုးရ ဟောင်းလဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ အစိုးရ အသစ်ဖြစ်ရင်လဲဖြစ်မယ် ဒီအပေါ်မှာ သူတို့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကျနော်တို့ ကြိုတင်ပြီးတော့ သတိပေးလိုက်တဲ့ သဘော မျိုးပေါ့။”လို့ ပြောပါတယ်။ စီမံကိန်းကနေ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စရာတွေမှာ ချိုးဖောက်ခံ ရမှုတွေများကြီးကြုံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၎င်းစက်ရုံတည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေသခံတွေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး နောက်မှာ အဆိုပါ စက်ရုံရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့မှကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ်တာ ဝန်ခံ ခွန်းအန်းဂျလိုကပြောပါတယ်။
“ ထုတ်တဲ့စာအုပ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု အစီရင်ခံစာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုလို့လဲ ပြော လို့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပူးပေါင်းကြံစည်မှု အစီရင်ခံစာမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာက ဒီတစ်ခုနဲ့ မပြီးဘူး။ ဘာလို့ဆို တော့ သူ့ရဲ့မူရင်းအစီအစဉ်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီမူရင်းအစီအစဉ်ကို အခုချိန်ထိ ဘယ်သူမှမပြောသေးဘူး။ အစိုးရလဲ တာဝန်မယူ ဘူး။ ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ ဒီကုမ္ပဏီကလဲ မပြောသေးဘူး။ ဒီစီမံကိန်းက အရမ်းကြီးတယ်။ အဲ့ဆိုတော့ ဒီလက်ရှိပူးပေါင်း ကြံ စည်မှု အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့ စီမံကိန်းဟာ ကျနော်တို့ ဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့ စာအုပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ မဖြစ်မနေပြောဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။”လို့ စောအယ်စေး ကပြော ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကရင်နီအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီး ထောက်ပြဝေဖန်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ ကုမ္မဏီဘက်ကနေ ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားတဲ့အကြောင်းကို သတ္တုသန့်စင်စက်ရုံတည် ဆောက်နေတဲ့ Global South Industrial Co.ltd ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမော် အခုလို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
ကရင်နီအကြီးစားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ (KMIW) အဖွဲ့ကို ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်းက လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မြေယာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ. တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ. ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အရေးတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူထုအခြေပြုအရပ်ဘက် အဖွဲ့ (၅)ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/m m/news-76847
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှေ့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တရားမျှတမှုမရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များအား အလိုမရှိဟုဆိုကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် ဦးဆောင်ခဲ့သူနှစ်ဦးအား ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည် ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဘုရားကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ခေါင်းဆောင်တဲ့နှစ်ဦးကို (ပ) ၆၅/ ၂၀၂၀ ငြိမ်းစုစီဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ ခုညပိုင်းမှာ အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ဇော်လင်းနဲ့ ညီညီ (ခ) ထွန်းမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ယင်းဆန္ဒပွဲတွင် ဦးဆောင်သူနှစ်ဦးမှာ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပရဟိတ အသင်းမှ ဦးဇော်လင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်အတွင်း ပါတီဝင်များ၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရာ၌ ကိုဗစ်ကပ်ကာလထုတ်ပြန်ထားသည့် ဒေသန္တရအမိန့်အား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် အတွက် အရေးယူပေးရန်တိုင်ကြားခဲ့ဖူးသည့် ညီညီ(ခ) ထွန်းမြင့်အောင်တို့ ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ တွင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ အသိပေးတင်ပြခြင်းမရှိဘဲ စုဝေးခြင်း သို့မဟုတ် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သုံးသောင်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။ https://news-eleven.com/article/197703
ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်များကို ကိုယ်ချင်းစာနာမိ၍ ကချင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှ ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်များ အတွက် ငွေကျပ် ၂၅ သိန်းကို မေယုဒေသ ပရဟိတအဖွဲ့မှတဆင့် နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့က ထောက်ပံ့လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကချင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူဒေါ်ထုနန်က“ ကျွန်မတို့ ကချင်တွေဟာ စစ်ဘေးရှောင် ဘဝ အများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ကျွန်မတို့ ခံစားဖူးတဲ့အတွက် ရခိုင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေကို ကိုယ်ချင်းစာ နာမိလို့ပါ။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီးခံစားကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းအတူရှိနေမှာပါလို့ပြော ချင်တယ်။ ရှေ့လျှောက်လည်း အများကြီးကူညီနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်လို့။ ရခိုင်စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူတွေနဲ့ အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်းအားလုံး ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုးစားကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ကိုဗစ် ကာလတွင် အခက်အခဲမျိုးစုံဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီး ရွယ်အိုများနှင့် ကလေး သူငယ်များကို ပို၍ ကိုယ်ချင်းစာနာမိကြောင်း၊ သို့အတွက် ယခုကဲ့သို့ စုပေါင်းကောက်ခံလှူးဒါန်း လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်စစ်ဘေးသင့်များသို့ ယခုကဲ့သို့ လှူးဒါန်းရသည့်အတွက် ဝမ်းသာကြောင်းသူမကပြောသည်။
မေယုဒေသ ပရဟိတအဖွဲ့မှ ၄င်းအလှူငွေများအားလက်ခံရရှိပြီး စစ်ဘေးရှောင်အများအတွက် အထွေထွေ စားနပ်ရိက္ခာလှူ ဒါန်းသွားမည်ဟု ၄င်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမေယုထွန်းကပြောသည်။ “ ငွေကျပ် နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းလှူတာပါ။ ရခိုင် စစ်ဘေးရှောင်တွေ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေကြတယ်ကြားလို့ အခုလိုဖြစ်နေတာကို သူတို့ စိတ်မကောင်းခံစား နေကြရ တဲ့အတွက် လှူဒါန်းကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ အခုလို လှူဒါန်း ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့”ဟုပြောသည်။ ၄င်းတို့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်သည့် ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76890
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေဟာ အဖွဲ့ချုပ် ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ တူညီတာကြောင့် နောက်လာမယ့် အနာဂတ် မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်က “နောင်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရှေးရှုရမည့် ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စ”နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ ၃၉ ပါတီကို ဒီနေ့ညနေ စာပေးပို့ ပြောကြားလိုက်တာပါ။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိတို့ ပြည်နယ်အသီးသီးမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြ တာကို သတိမူမိပြီး အချို့ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ ကျေနပ်ဖွယ် ရလဒ်ရခဲ့ကြပေမဲ့ တချို့ပါတီတွေက ရည်မှန်းချက်အတိုင်း မဖြစ်လာကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လိုအခြေအနေ ရောက်သည်ဖြစ်စေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ နောက်အနာဂတ်မှာ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မမှိတ်မသုန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ http://burmese.dvb. no/archives/423636
ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း စသည့် ပြည်နယ်များတွင် အနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကယား၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်လည်း အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်အထိ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဟု သက် ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ များထံမှ သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် မဲဆန္ဒနယ် ၃၉ နေရာ ရှိသည့်အနက် လွှတ်တော်သုံးရပ်လုံးအတွက် NLD ပါတီက ၃၆ နေရာ အထိ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ်၏ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဘွေ့ က “ဒီတစ်ခါက ကျနော်တို့က ၃၉ နေရာမှာ ၃၆ နေရာ နိုင်တယ် နော်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်က ၉၂.၃ နဲ့ အနိုင်ရရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ပါတီမှ မခေါ်ပဲနဲ့ အစိုးရဖွဲ့ ဖို့အတွက် စီ စဉ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့က ၂၀၁၅ ထက် ပိုပြီး ဒီတခါမှာ သာသွားတာပါ” ဟု ပြောသည်။ NLD ပါတီ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် နေရာ ၃ နေရာထဲမှ ဟားခါးမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်-၁ တွင် ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) တစ်နေရာ၊ တွန်းဇံမြို့နယ်တွင် ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် တစ်နေရာနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် (၂) နယ်မြေတွင် တစ်နေရာ အနိုင်ရရှိ ခဲ့ ကြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ်က ပြည်နယ်အတွင်း NLD ပါတီ၏ မဲရရှိမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ “လက်ရှိက ပြည်နယ်ထဲမှာ ကျနော်တို့က ၃၆ နေရာမှာ ၂၉ နေရာ လောက် နိုင်ထား တယ်။ အစိုးရဖွဲ့ဖို့တောင်ပိုနေသေးတယ်။ ၂၆ ဆိုရင် အစိုးရဖွဲ့လို့ရတာဆိုတော့လေ။ ၃၆ နေရာမှာ ပြည်သူတွေက မှန်မှန် ကန်ကန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လို့ အခုလိုနိုင်တာ။ ပါတီဆိုက်ကတော့ ပြည်နယ်ကတော့ ဗဟိုညွှန်ကြားချက် အတိုင်းပဲ သွားရမှာပေါ့။ အခုဒီစာရင်းက အတည်ပြု တယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ မဲဆန္ဒနယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ရတဲ့ဟာနော်။ ပြည်နယ်ကော်မရှင်က အတည်ပြုတဲ့ဟာတော့ မဟုတ်သေးဘူးနော်” ဟု ပြောသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ နမ့်ဆန် မြို့နယ်တို့တွင် တအာင်းအမျိုးသားပါတီ (TNP) က နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ နှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တို့တွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်စလုံးတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် ပြည်နယ် (၁) တွင် တစ်နေရာ၊ မူဆယ်ခရိုင်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် တစ်နေရာ အနိုင်ရရှိထားသည်။ https://www.bnionline.ne t/mm/news-76881
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာကျင်းပသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် တောင်ကြီး အေးသာယာရုံးသို့ မဲလာပေးသည့် အမျိုးသားတဦး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပိုးရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့နယ် အေးသာယာမြို့ရှိ မဲရုံတစ်ရုံတွင် မဲသွားပေးခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၁၂) ရက်မှာ Rapid Antigen Diagnostic Test Kit နှင့် စစ်ဆေးရာမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည်နယ် ကုသရေး နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဇဝနကို က သျှမ်းသံ တော်ဆင့် ကိုပြောသည်။“သူနဲ့ ထိတွေ့သူကတော့ သူ့မိသားစုရှိတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်လည်းတော့ သေချာမသိရဘူး။ စောင့်တဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့ အရှေ့ သူ့ရဲ့ အနောက် ဘယ်သူလည်း ဆိုတာကိုတော့ ပြန်လိုက်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အစဉ်လိုက်တိုင်း နာမည်ယူထားတာမဟုတ်ဘူး။”ဟု ဒေါက်တာဇဝနကို က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
လက်ရှိမှာ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အေးသာယာမြို့ရှိ မဲရုံ အမှတ်(၃) မှ မဲရုံစောင့်သူ အားလုံးကို Quarantine ဝင်ထား ခိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။“ရန်ကုန်သွားဖို့အတွက် ဒီနေ့မှာ Test Kit နဲ့ စစ်လိုက်တာ” ဟု ဒေါက်တာ ဇဝနကို က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်သူ (၁၅၀) ဦးကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19447
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လေရှီးမြို့နယ်၌ NLD ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်အတုပြုလုပ်မှု၊ ငွေငါးသောင်းကျပ်ပေး၍ မဲထည့်ခိုင်းမှု၊ ခရီးလွန်နေသူ ကိုယ်စားကြိုတင် မဲထည့်ပေးမှုစသည်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် တိုင်ကြားလိုက်ကြောင်း လေရှီးမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီး (၂) လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်း ဦးရှိသီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါတိုင်ကြားစာထဲတွင် သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန်မှရောက်သော ကြိုတင်မဲများလက်ခံခြင်း၊ ကုံကိုင်လုံရွာမမဲရုံတွင် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်များ အတုပြုလုပ်မဲထည့်စေမှု၊ ဖွန်သရက်ကျေးရွာတွင် မသမာနည်းလမ်းဖြင့် ငွေငါးသောင်းကျပ်ပေး၍ NLD ပါတီတွင် မဲထည့်စေမှုစသည့်အချက်များနှင့် တိုင်ကြားထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။“ပြီးတော့ ပန်းဆပ် ကျေးရွာ မှာ ခရီးလွန်နေသူကိုယ်စား ကြိုတင်မဲထည့်ပေးမှု၊ ဆွမ္မရာအမှတ်- ၁ မဲရုံ USDP နှစ်ဆယ့်လေးမဲအပေါ် UEC တံဆိပ်တုံး မှင်အနည်းငယ်စွန်းထင်နေတာကို ပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်မှု၊ တိုင်း (၂) နယ်မြေမှာ ဆန္ဒမဲမပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မဟုတ်မမှန် စာဖြန့်ဝေမှု၊ NLD ပါတီကို မဲထည့်ရင် ဆိုလာနဲ့ မီးရမယ့်အကြောင်း ကုံကိုင်လုံရွာမမှာ စည်းရုံမှု စတာတွေနဲ့ တိုင်ထားပါတယ်”ဟု လေရှီးမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီး (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးရှိသီးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက ရဲအရေးပိုင်သည့်ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့် ရဲစခန်း၌သာ တိုင်ကြားရန် ပြောကြား ထားကြောင်း၊ ပယ်မဲ ခိုင်လုံမဲ ကိစ္စရပ်များကို မဲရုံးမှူးက ဆုံးဖြတ်ကြောင်း၊ မဲရုံးမှူးဆုံးဖြတ်သည့် ကာလအတွင်း မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ် အကူကိုယ်စားလှယ်က ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အမည်စာရင်း ကြေငြာအပြီး ၄၅ ရက်အတွင်း သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် UEC ထံ ငွေကျပ် ငါးသိန်း ပေးကာ ခုံရုံတွင် တိုင်ကြားခွင့်ရှိကြောင်း နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ တိုင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေရှီးမြို့နယ် NLD ပါတီမှ လက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရိထင် “သူတို့တင်တော့ တင်ထားတာပါပဲ။ သူတို့ကို ပြန်ပြီးတော့ စွပ်စွဲရမှာ အများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း သက်သေအထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲဆိုတာ ပါတီနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်အုံးမယ်။ ဒီအချိန်ကတော့ ဘာမှမပြောချင်သေးဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/197661
၁။ ကရငျပွညျနယျ မှနျဝနျကွီးနရော မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ ပွိုငျဘကျကို မဲ ၈၀၀၀ သာနေ
၂။ ညီနောငျမဟာမိတျ (၃) ဖှဲ့ ဒီဇငျဘာလအထိ တဈဖကျသတျ အပဈရပျကွညောခကျြ သကျတမျးတိုး
၃။ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ ဒီဇငျဘာ မတိုငျမီ ကငျြးပပေးရနျ AA တိုကျတှနျး
၄။ ကွာအငျးဆိပျကွီးရှိ မဲရုံတဈခုတှငျ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၅ဝဝ ကြျော ရှိသျောလညျး မဲလာထညျ့သူတဈဦးမြှ မရှိခဲ့
၅။ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရေး AA တောငျးဆိုခကျြကို တပျမတျော လကျခံ
၆။ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုမြား၏ ဆန်ဒကို အလေးထားမညျ ဟု NLD ကွညော
၇။ ကရငျပွညျနယျ အမြိုးသားလှတျတျော အမှတျ ၉ တှငျ NLD က KNDP ကို ငါးမဲအသာဖွငျ့နိုငျ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ တဈခု လုံး ၏ မဲရလဒျကိုပွနျလညျစဈဆေးပေးရနျ KNDP တောငျးဆိုထား
၈။ အမျးတှငျ လကျနကျကွီးကညျြ ထိမှနျ၍ လူ ၆ ဦးဒဏျရာရ
၉။ မိုးကုတျမွို့အနီး ကြေးရှာမြား TNLA စဈကွောငျးဝငျလာသဖွငျ့ ဒသေခံမြားတိမျးရှောငျ
၁၀။ သတငျးတု သတငျးမှားကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ရှုံးနိမျ့ရခွငျးဟု KSPP ဒု ဥက်ကဌ ပွော
၁၁။ ရှေးကောကျပှဲ နောကျ သြှမျး/တောငျ RCSS/SSA လှုပျရှားနယျမွသေို့ အစိုးရတပျ အငျအားဖွညျ့
၁၂။ ဒဘတျ (Dabak) ကြေးရှာ နရေပျပွနျနိုငျရေး စိစဈမှုမြား လုပျဆောငျနေ
၁၃။ တပျခြုပျ ကိုယျရေးအရာရှိဟောငျး ဦးလငျးဇျောထှနျး အပါအဝငျ ကွံ့ခိုငျရေး အနိုငျရသော မိုငျးဖွတျတှငျ ပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့ က မဲဆန်ဒရှငျမြားကို ကားအကွိုအပို့လုပျ၍ မဲထညျ့ခိုငျး၊ မဲမသမာမှုမြားရှိ၍ SNLD တိုငျကွားမညျ
၁၄။ မွနျမာအပါအဝငျ ပဋိပက်ခဖွဈနတေဲ့ နိုငျငံတှမှော မွမွှေုပျမိုငျးကွောငျ့ သဆေုံးမှုမြားပွား
၁၅။ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး အနျအယျလျဒီအပါအဝငျ အားလုံးနှငျ့ပူးပေါငျးမညျဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစား လှယျပွော
၁၆။ ကခငျြနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ၏ လီဆူတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး ၂ နရောကို LNDP အနိုငျရ
၁၇။ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးရနျ ဗိုလျခြုပျကွီးမြား ဦးဆောငျသညျ့ကျောမတီဖှဲ့စညျး
၁၈။ စဈတှေ မဲသမာမှု ရှေးကျောတာဝနျရှိသူမြားကို အရေးယူရနျ လုပျဆောငျနေ
၁၉။ ဟိုပုံးမွို့နယျတှငျ PNO ပါတီ ၃နရော အနိုငျရရှိထား-
၂၀။ မယေုမွဈကွောငျး တပျမတျောပိတျဆို့ထားလို့ ဒသေခံတှေ အခကျကွုံ
၂၁။ နှငျးဆီပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောမွငျ့အား ထောငျပွေးမှု အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျခြ
၂၂။ ပူတာအိုခရိုငျအတှငျးက မဲဆန်ဒနယျ ၇ ခုတှငျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ အနိုငျရရှိ
၂၃။ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပခဲ့သညျ့နယျမွမြေား၌ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ အမွနျဆုံးကငျြးပရနျ ဥရောပသမဂ်ဂတိုကျတှနျး
၂၄။ အစိုးရသဈလကျထကျမှာ အကွီးစား စီမံကိနျးတှေ တာဝနျယူမှုရှိဖို့ စောငျ့ကွညျ့ရေးကှနျယကျအဖှဲ့ တှပွေငျဆငျ
၂၅။ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးရှတှေ့ငျ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့သညျ့ ဦးဆောငျသူနှဈဦးအား ငွိမျးစုစီ ပုဒျမ ၁၉ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့
၂၆။ ကခငျြစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုအမြိုးသမီးအဖှဲ့ခြုပျမှ ရခိုငျစဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ငှကေပျြ ၂၅ သိနျးလှူဒါနျး
၂၇။ အနာဂတျ၌ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြား၏ဆန်ဒ အလေးထားလုပျမညျဟု အနျအယျလျဒီ ကတိပွု
၂၈။ ကခငျြ၊ ကရငျ၊ ခငျြးပွညျနယျမြားတှငျ NLD က အပွတျအသတျနိုငျ
၂၉။ တောငျကွီး အေးသာယာမဲရုံသို့ မဲသှားပေးခဲ့သညျ့ အမြိုးသားတဦး ကိုဗဈ-၁၉ တှေ့
၃၀။ လရှေီးမွို့နယျ၌ NLD ပါတီက မဲပေးနိုငျရနျ မှတျပုံတငျအတုပွုလုပျခွငျး၊ ငှေ ပေး၍ မဲထညျ့ခိုငျခွငျး၊ ကိုယျစား ကွိုတငျ မဲထညျ့ပေးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျဟုဆိုကာ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီက ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ တိုငျကွား
ကရငျပွညျနယျ၌ မှနျတိုငျးရငျးသားရေးရာနရောကို ဝငျရောကျအရှေးခံသညျ့ MUP-မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျ လောငျး မငျးထှနျးလှငျက ပွိုငျဘကျ NLD-အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျး နိုငျထှနျးခဈြကို မဲ ၈ ထောငျဝနျးကငျြဖွငျ့ အသာရနကွေောငျး သိရသညျ။ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ(UEC) မှ တရားဝငျ ထုတျပွနျ ခွငျးမရရှိသေးသောကွောငျ့ အတညျပွုပွောဆိုရနျ လိုအပျနသေေးကွောငျး MUP ၏ မှနျတိုငျးရငျးသား ကိုယျစားလှယျ လောငျး မငျးထှနျးလှငျက (နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျ နေ့)တှငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ မငျးထှနျးလှငျက “UEC အတညျမပွု မခငျြး က ပွောလို့မရသေးဘူး။ ခနျ့မှနျးခြေ မဲရလဒျကတော့ ကနြေျာ့အနနေဲ့ မဲ ၈ ထောငျလောကျ ပွိုငျဘကျနဲ့ အသာရထားတယျ။ ကနြျောနဲ့ ပွိုငျတဲ့ ကနြျော အပါအဝငျ ၇ ယောကျဟာဆိုရငျ ပွိုငျဘကျအနနေဲ့ မဟုတျဘဲ တိုငျးရငျးသားတှအေတှကျ လကျတှဲပွီး လုပျဆောငျတဲ့သူလို့ မွငျပါတယျ။”ဟု ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ ကရငျပွညျနယျ၊ မှနျဝနျကွီးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါက MUP ၏ ပါတီမူဝါဒအတိုငျး ဖကျဒရယျပွညျ ထောငျစုကိုသှားသညျ့အခါ ဝိုငျးဝနျးပံ့ပိုးကူညီသှားမညျ့အပွငျ တိုငျးရငျးသားမြား၏ တနျးတူအခှငျ့အရေး၊ လုံခွုံရေး မြားကို လညျး ဦးစားပေးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး မငျးထှနျးလှငျက ဆကျပွောသညျ။ NLD (ကရငျပွညျနယျ)၏ လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျလညျး ကရငျပွညျနယျ၏ မှနျဝနျကွီးနရောအတှကျ MUP မှ မငျးထှနျးလှငျ၊ ပအိုဝျးဝနျကွီး နရော အတှကျ NLD မှ ခှနျမြိုးတငျ့၊ ဗမာဝနျကွီးနရောအတှကျ NLD မှ ဦးတငျဝငျးတို့ ရရှိ သှားကွောငျး ယမနျနကေ့ ဖျောပွထား သညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80% b9%e1%80%bb
ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)၊ တအာငျးအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော(TNLA)နှငျ့ MNDAA(ကိုးကနျ့)တို့ ပါဝငျသညျ့ ညီနောငျမဟာမိတျ(၃)ဖှဲ့အနဖွေငျ့ နိုဝငျဘာလ ၁၁ရကျနမှေ့စ၍ လာမညျ့ ဒီဇငျဘာလကုနျအထိ တဈဖကျသတျ အပဈ ရပျခွငျးကို သကျတမျးတိုးလိုကျကွောငျး သဘောထား ကွညောခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျက ထုတျပွနျသညျ့ ကွညောခကျြအရ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအပွီး နောကျထပျ အစိုးရသကျတမျးကို ဦးဆောငျမညျ့ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ(NLD) အစိုးရနှငျ့ တပျမတျောတို့အကွား လကျတှကေ့သြညျ့ ငွိမျးခမျြး ရေးလုပျငနျးစဉျမြား ဆှေးနှေးညှိ နှိုငျးနိုငျရနျအတှကျ ယခုလို တဈဖကျသတျ အပဈရပျခွငျးကို ထပျမံ သကျတမျးတိုးမွှငျ့ ခွငျးဖွဈသညျဟု ၎င်းငျးတို့က ဆိုသညျ။
ညီနောငျမဟာမိတျ (၃)ဖှဲ့အနဖွေငျ့ တိုကျပှဲမြားလြှော့ခပြွီး နှဈဖကျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြား ဖွဈပျေါတိုးတကျရနျအတှကျ တဈဖတျသတျ အပဈရပျကွညောခကျြကို ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၉ခုနှဈ စကျတငျဘာလက စတငျထုတျပွနျခဲ့ပွီး ယခု ၂၀၂၀ ခု နှဈ အထိ တဈဖကျသတျ အပဈရပျစဲကွောငျးကို (၇)ကွိမျတိုငျတိုငျ ဆကျတိုကျ သကျတမျးတိုးမွှငျ့ခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးတို့၏ ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ အလားတူ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ကွိုတငျကနျ့သတျမှုမပါသညျ့ အပဈအခတျရပျစဲမှုမြိုးကို ဆှေးနှေးရနျ အဆငျသငျ့ဖွဈကွောငျးနှငျ့ တဈနိုငျငံလုံး အပဈအခတျရပျစဲပွီး စဈမှနျသညျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲကို FPNCC (ပွညျထောငျစု နိုငျငံရေး ဆှေးနှေး ညှိနှိုငျးရေးကျောမတီ) ဦးဆောငျမှုဖွငျ့ လိုကျပါဆှေးနှေးရနျ အမွဲအဆငျသငျ့ဖွဈကွောငျး ကိုလညျး ၎င်းငျးတို့၏ သဘောထားထုတျပွနျခကျြ၌ ထပျမံဖျောပွထားသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ ညီနောငျမဟာမိတျ (၃)ဖှဲ့တို့ အနဖွေငျ့ တဈဖကျသတျ အပဈအခတျရပျဆိုငျးကွောငျး အပွနျအလှနျ ထုတျပွနျမှုမြား ရှိခဲ့သျောလညျး လကျတှမွေ့ပွေငျ ဒသေမြားတှငျ စဈရေးပဋိပက်ခမြား ဆကျလကျဖွဈပှားလကျြရှိပွီး အရပျသားထိခိုကျသဆေုံးမှုနှငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျရ မှုမြား ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ။
ထို့နောကျ ယုံကွညျမှု တိုးတကျရနျနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြား လှယျကူစရေနျ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျး မြားအပျေါ အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျး၊ မတရားအသငျး ကွညောခကျြမြားကို ပွနျလညျ ရုပျသိမျးပွီး ပထမအစိုးရ သကျတမျး တှငျ ကွုံတှခေဲ့ရသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ အကွပျအတညျးမြားကို ပွနျလညျသုံးသပျကာ တိုငျးရငျး သားပွညျသူ အကြိုးကို ဦးတညျသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို ရဲဝံ့စှာခမြှတျရနျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ မဟာမိတျအဖှဲ့အစညျး နှငျ့ ရပျတနျ့နသေညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို ရှဆေ့ကျနိုငျရေး အစိုးရသဈအနဖွေငျ့ အထူးအလေးပေး ဆောငျ ရှကျရနျကိုပါ တိုကျတှနျး တောငျးဆိုထားသညျ။ အလားတူ ရှေးကောကျပှဲအပွီး နောကျတဈရကျ နိုဝငျဘာလ (၉)ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာအစိုးရ တပျမ တျောမှ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြား ဆကျလကျဆှေးနှေးနိုငျရနျအတှကျ တပျမတျောနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျ ရှိလာပါက ဒုတိယဗိုလျခြုပျ ကွီးရာပွညျ့ ဦးဆောငျသညျ့ တပျမတျော၏ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှုကျောမတီကို ဖှဲ့စညျးကွောငျးထုတျ ပွနျကွညောခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%b1%e1%80%94% e1%80%ac%e1%80
ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပရသေးသညျ့ မွို့နယျမြားတှငျ ဒီဇငျဘာလ ၃၁ ရကျမတိုငျမီ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျ ကငျြးပ ပေးရနျအတှကျ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) က ယနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျခကျြထုတျကာတိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ ထိုထုတျ ပွနျခကျြ၌ ရခိုငျပွညျနယျ မွို့နယျအမြားစုမှာ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျခဲ့သောကွောငျ့ ယငျးဒသေအတှငျး နထေိုငျသူမြား အနဖွေငျ့ မဲပေးခှငျ့ မရရှိခဲ့ကွဘဲ ပွညျသူ့အသံ ကိုယျစားပွုနိုငျသော ရှေးကောကျခံ ကိုယျစားလှယျမြားကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသကဲ့သို့ နိုငျငံသား အခှငျ့အရေး၊ တိုငျးရငျးသား အခှငျ့အရေး၊ ဒီမိုကရစေီ အခှငျ့အရေးမြား နဈနာခဲ့ကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
AA ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ခိုငျသုခ က “အဓိကကတော့ မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ မဆုံးရှုံးရအောငျ ရှေးကောကျပှဲ ကို စောနိုငျသမြှ စောအောငျ အမွနျဆုံး ကငျြးပနိုငျလေ ကောငျးလပေေါ့ဗြာ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျ မတိုငျခငျ ကငျြးပရငျ ကောငျးတယျလို့ ကနြျောတို့က အကွံပွုတာဖွဈပါတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ သို့သျောလညျး ဦးခိုငျသုခ က ၎င်းငျး၏ Facebook စာမကျြနှာထကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပသညျ့ နိုငျဝငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျအရှူံး သညျ ရခိုငျးတိုငျးရငျးသားမြားဘဝ အပွောငျး အလဲမဟုတျဘဲ ရခိုငျနိုငျငံပွနျရရေး တိုကျပှဲဝငျခွငျးကသာ မှနျကနျသညျ့ နညျး လမျးဖွဈကွောငျး လူမြိုးရေးကို တညျ၍ လှုံ့ဆျော ရေးသား လှငျ့တငျခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပရသေး သော မွို့နယျမြား၌ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲအား၂၀၂၀ ဒီဇငျဘာလ ၃ ရကျ မတိုငျမီ ကငျြးပနိုငျရနျ NLD အစိုးရနှငျ့ တပျမတျော တို့အား မတ်ေတာရပျခံ တိုကျတှနျးအပျပါသညျဟု ရေးသားထားသညျ။
အဆိုပါနရောမြား၌ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျ ကငျြးပနိုငျရနျ မိမိတို့သညျ့ တဖကျသတျ အပဈရပျစဲခွငျးအား နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျ မှ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ ထပျမံ သကျတမျးတိုးမွှငျ့ခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာ့တပျမတျော အနဖွေငျ့လညျး ရခိုငျပွညျ နယျအတှငျး ထိုးစဈဆငျ တိုကျခိုကျနမှေုမြားကို ရပျတနျ့ပွီး တနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာ လှမျးခွုံသော အပဈအခတျရပျစဲရေး ကို ကွညောကာ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ အမွနျဆုံး ကငျြးပနိုငျရေး NLD အစိုးရနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျးလညျး ပါရှိသညျ။ ထိုသို့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျရနျ လိုအပျသညျ့ တညျငွိမျသော အခငျးအကငျြး အခွအေနတေခုကို ဖနျတီးရနျ အတှကျ နိုငျငံတျော အစိုးရ၊ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးအသီးသီးတို့နှငျ့ သငျ့တျောသလို ပံ့ပိုးကူညီလုပျဆောငျသှားရနျ ဆန်ဒရှိ ကွောငျးကို AA ၏ သဘောထားကို ထုတျပွနျခကျြ၌ ဖျောပွထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/ 11/12/233303.html
ကရငျပွညျနယျ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁)တှငျ ပါဝငျသညျ့ တောငျကလေးကြေးရှာအုပျစုတှငျ ဆန်ဒမဲ လာ ထညျ့သူ အနညျးငယျသာရှိပွီး တောငျကလေးမဲရုံ ၃တှငျ မဲလာထညျ့သူ တဈဦးတဈယောကျမြှမရှိခဲ့ဟု မဲရုံတာဝနျရှိသူ မြားထံမှ သိရသညျ။ ကြိုကျဒုံ၊ အဇငျးဒသေဘကျ ထိစပျလကျြရှိသညျ့ တောငျကလေးကြေးရှာအုပျစုသညျ ကရငျတိုငျးရငျး သား အမြားစုသာနထေိုငျကွပွီး ကှီလုံးတိုငျ၊ သပွု၊ ထီးတပလုခီး၊ လျောပခီး၊ ဒူးပျေါ၊ တောငျကလေး၊ ရှာကတျော၊ မျောတလှာ၊ ကရကသြဲရှာ အပါအဝငျ ရှာပေါငျး ၂ဝ ဝနျးကငျြရှိကာ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၁,ဝဝဝ ကြျောရှိခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးတို့ ကြေးရှာအမြားစုမှာ မဲရုံတညျရှိ သညျ့နရောနှငျ့ အလှမျးဝေးသညျ့အပွငျ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး အခကျအခဲရှိသောကွောငျ့ အမြားစုမဲလာထညျ့နိုငျခွငျးမရှိခဲ့ဟု ဒသေတာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
တောငျကလေးကြေးရှာအုပျစု မဲရုံမှူး စောလငျးထူးက “ကနြျောတို့မဲရုံ ၃ မှာ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၅၂၅ ယောကျရှိတယျ။ နိုဝငျဘာ ၄ ရကျမှာ ကွိုတငျမဲ ၁ မဲပဲရတယျ။ အဲဒီမဲကလညျး ဒီမှာမဲရုံတာဝနျကသြူတဈဦးက ထညျ့တဲ့မဲပါ။ ရှာသားတှေ တဈယောကျမှ မဲလာထညျ့တာမရှိဘူး။ သူတို့ရှာနဲ့ ဝေးတာလညျးပါမယျ၊ လမျးပနျးခရီးဆကျသှယျရေး မကောငျးတာလညျးပါမယျ”ဟု ယနေ့ (နိုဝငျ ဘာ ၁၁ ရကျ)တှငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ၎င်းငျးကြေးရှာအုပျစုမြားတှငျ မဲရုံ ၃ ရုံထားရှိပွီး မဲရုံ ၁ တှငျ ဆန်ဒမဲလာထညျ့သူ ၁ဝဝ ကြျော၊ မဲရုံ ၂ တှငျ ၂ဝ ကြျောနှငျ့ မဲရုံ ၃ တှငျ တာဝနျကဝြနျထမျးတဈဦး၏ ကွိုတငျမဲ ၁ မဲသာ ရရှိပွီး ကြေးရှာပေါငျး ၂ဝ ဝနျးကငျြတှငျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၁,ဝဝဝ ကြျောရှိသျော လညျး ဆန်ဒမဲလာထညျ့ဦးရေ ၂ဝဝ ကြျောသာ ရှိခဲ့သညျ။ လြှို့ဝှကျဆန်ဒမဲအမြားစုမှာ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ -KNDP၊ တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျး စောယှာဝျေါမငျးနှငျ့ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP) လှတျတျော ကိုယျစားလောငျးမြားကို အမြားစု မဲထညျ့ခဲ့ကွသညျဟု မဲရုံတာဝနျသူထံမှ သိရသညျ။
ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ နိုငျငံရေးပါတီ ၅ ပါတီမှ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး မဲဆန်ဒနယျ (၁) နှငျ့ မဲဆန်ဒနယျ (၂) နရောစလုံးတှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD) လှတျတျောကိုယျစားလောငျးမြားက မဲအသာစီး ဖွငျ့ အနိုငျရရှိ သညျဟု နိုငျငံရေးပါတီတာဝနျရှိသူထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%81%be% e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80% 84%e1%80
ဒီဇငျဘာလ မကုနျခငျ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျ ကငျြးပနိုငျရေးအတှကျ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) ၏ တောငျးဆိုခကျြ ကို တပျမတျောဘကျက လကျခံကွိုဆိုပွီး သဘောတူပါသညျ ဟု ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီး ခြုပျရုံးကလညျး ယနညေ့ တှငျ ထုတျပွနျခကျြတစောငျ ထုတျကာ AA ဘကျမှ မတ်ေတာရပျခံခကျြကို ကွိုဆိုပါသညျဟု ပွောပွီး ရှေးကောကျပှဲပွုလုပျရနျ ကနျြရှိသညျ့ နရောမြား၌ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲပွုလုပျနိုငျရနျ အတတျနိုငျဆုံး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျ သှားပါမညျဟုလညျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ထညျ့သှငျးရေးသားထားသညျ။ တပျမတျော သတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက “ULA/ AA ဟာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တပျ မတျော အနနေဲ့ ကွိုဆိုတယျ။ သဘောတူတယျ။ ပွီးရငျ အဲဒါတငျ မကဘူး။ ရှမျးပွညျနယျမှာ လုပျဖို့ ကနျြနတေဲ့ မိုငျးကိုငျနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး လုပျနိုငျဖို့အတှကျ ဆှေးနှေး ညှိနှိုငျးကွဖို့ သဘောတူတယျ” ဟု ပွောသညျ။
AA က ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ ထုတျပွနျခကျြ တစောငျထုတျခဲ့ပွီး ထိုထဲတှငျ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျက အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲတှငျ ပါဝငျ မကငျြးပခဲ့ရသညျ့ နယျမွမြေားကို ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျ နောကျဆုံးထား၍ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျ လညျ ကငျြးပပေးရနျ NLD အစိုးရနှငျ့ မွနျမာ့ တပျမတျောတို့အား မတ်ေတာရပျခံ တိုကျတှနျးပါသညျဟု ရေးသားထားသညျ။ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးနိုငျရနျအတှကျ လိုအပျသညျ့ ဒသေတညျငွိမျရေးနှငျ့ တညျငွိမျသညျ့ အခငျးအကငျြး အခွေ အနေ တခုကို ဖနျတီးရနျအတှကျလညျး နိုငျငံတျော အစိုးရ၊ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျး အသီးသီးနှငျ့အတူ သငျ့တျောသလို ပံ့ပိုး ကူညီသှားရနျလညျး ဆန်ဒရှိပါသညျဟု AA က ထုတျပွနျခကျြတှငျ ထညျ့သှငျး ရေးသားထားသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ၏ မွို့နယျ အမြားစုတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျခဲ့သဖွငျ့ ဒသေခံလူထုမြားက မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ပွီး ပွညျ သူ့အသံကို ကိုယျစားပွုမညျ့ ရှေးကောကျခံ ကိုယျစားလှယျလညျး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖွငျ့ ဒသေခံမြားက နိုငျငံသား အခှငျ့အရေး၊ တိုငျးရငျးသား အခှငျ့အရေးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီ အခှငျ့အရေးမြားလညျး ဆုံးရှုံး နဈနာရပါသညျ ဟုလညျး AA က ထုတျပွနျခကျြ တှငျ ရေးသား ထားသညျ။
ဦးခိုငျသုခက “အဓိကကတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး အဖွရှောရေး အတှကျပဲဖွဈဖွဈ၊ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲတှေ အတှကျပဲ ဖွဈဖွဈ အဓိက အတားအဆီး ဖွဈနတေဲ့ကိစ်စတှကေို အတားအဆီး လုပျထားတဲ့ သူတှကေ ဖွလြှေော့ပေးလို့ လိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျဒသေမှာ စဈဆငျရေးတှေ ထိုးစဈတှေ လုပျနတေဲ့ မွနျမာစဈတပျကနေ ထိုးစဈတှကေို ရပျတနျ့ပေးဖို့ လိုပါ တယျ။ တဖကျနဲ့တဖကျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးနိုငျအောငျ မွနျမာစဈတပျနဲ့ အစိုးရဘကျက လုပျထားတဲ့ ပိတျပငျကနျ့သတျမှုနဲ့ အတားအဆီးတှကေို ဖွလြှေော့ပေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗြာ”ဟုလညျးပွောသညျ။ တပျမတျောဘကျမှ ကွားဖွတျရှေး ကောကျပှဲကို ဆောလငျြစှာ ကငျြးပပေးရနျ ပွောဆိုထားသျောလညျး လကျရှိအခြိနျထိ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျ ကငျြးပရေး၊ မကငျြးပရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ နိုငျငံတျော သမ်မတရုံးမှ တစုံတရာပွောဆိုခွငျး မရှိသေးပါ။ https://burma.irraw addy.com/news/2020/11/12/233321.html
တိုငျးရငျးသားပါတီမြား၏ ရညျမှနျးခကျြမြားသညျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီ၏ ရညျမှနျးခကျြမြားနှငျ့ တူညီ ကွသဖွငျ့ အနာဂတျတှငျ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုမြား၏ ဆန်ဒမြားကို အလေးထား ဆောငျရှကျသှားမညျဟု NLD ပါတီက ကွညောခကျြ ထုတျလိုကျသညျ။ NLD ပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ (၂) ဖွဈသူ ဒေါကျတာ ဇျောမွငျ့မောငျ လကျမှတျရေး ထိုးထားသညျ့ နောငျအနာဂတျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ရှေးရှုရမညျ့ ပွညျထောငျစုအရေးကိစ်စဟု အမညျတပျထားသော အဆိုပါကွညောခကျြ ကို NLD ပါတီက နိုဝငျဘာလ (၁၂ ) ရကျတှငျ ၎င်းငျး၏ Facebook စာမကျြနှာမှတဆငျ့ ထုတျပွနျလိုကျခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
NLD ပါတီအနနှေငျ့ မညျသညျ့ အခွအေနကေို ရောကျသညျဖွဈစေ နောငျအနာဂတျ၌ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစု ပျေါထှနျးရေးအတှကျ မမှိတျမသုနျ ဆကျလကျ ကွိုးပမျးသှားမညျ ဖွဈသညျဟုလညျး ကွညောခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ကလညျး NLD ပါတီက ဖျောဆောငျမညျ့ ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုအရေးကို တကျတကျ ကွှကွှ ပူးပေါငျးပါဝငျ ကွမညျဟု မြှျောလငျ့ကွောငျးလညျး ကွညောခကျြတှငျ ဆိုထားသညျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ကလညျး NLD ပါတီက ဖျောဆောငျမညျ့ ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုအရေးကို တကျတကျ ကွှကွှ ပူးပေါငျးပါဝငျ ကွမညျဟု မြှျောလငျ့ကွောငျးလညျး ကွညောခကျြတှငျ ဆိုထားသညျ။ NLD က စာပေးပို့ထားသညျ့ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေး ပါတီမြားထဲတှငျ ပါဝငျသော ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ ခြုပျ (SNLD) ပါတီနှငျ့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) တို့ကမူ အဆိုပါ စာသညျ ၎င်းငျးတို့ ပါတီထံသို့ မရောကျရှိသေးသဖွငျ့ စာပါ အကွောငျးအရာမြားကို မသိသေးဟုဆိုသညျ။
သို့သျောလညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမညျဆိုသညျ့အခကျြကိုမူ ယဘေူယအြား ဖွငျ့ ကွိုဆိုကွောငျး ပွောကွသညျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပမီ နိုဝငျဘာလ ၄ ရကျက သမ်မတအိမျတျော၌ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျး ပှဲတှငျလညျး သမ်မတရုံးပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးက၂၀၂၀ အလှနျတှငျ အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရ (National Unity Government) ပျေါထှကျလာမညျဟု ပွောဆိုဖူးသညျ။ https://burma.irra wad dy.com/election-2020/2020/11/12/233318.html
၇။ ကရငျပွညျနယျ အမြိုးသားလှတျတျော အမှတျ ၉ တှငျ NLD က KNDP ကို ငါးမဲအသာဖွငျ့နိုငျ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ တဈခု လုံး ၏ မဲရလဒျကို ပွနျလညျစဈဆေးပေးရနျ KNDP တောငျးဆိုထား
ကရငျပွညျနယျ၊ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ ၉ ၌ NLD ကိုယျစားလှယျ နနျးမိုးမိုးထှေးက KNDP ကိုယျစားလှယျ စောမွငျ့ဟနျကို ငါးမဲအသာဖွငျ့ အနိုငျရသှားပွီး မွို့နယျတဈခုလုံး၏ မဲရလဒျအပျေါ ပွနျလညျ စဈပေး ရနျ KNDP က တောငျးဆိုထားကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ မဲဆန်ဒနယျတှငျ ကိုယျစားလှယျ လေးဦးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး NLD ကိုယျစားလှယျ နနျးမိုးမိုးထှေးက ၂၀,၁၄၆ မဲ၊ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ (KNDP) ကိုယျစားလှယျ စောမွငျ့ဟနျ က ၂၀,၁၄၁ မဲ၊ USDP ကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးထှနျးဦး က ၁၃,၀၉၁ မဲ၊ ပွညျ ထောငျစု ကောငျးကြိုးဆောငျပါတီမှ ကိုယျစားလှယျ ဦးမွတျကြျောက ၆၆၃ မဲ အသီးသီး ရရှိခဲ့ပွီး မွို့နယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲက ထုတျပွနျသညျ့ မဲရလဒျအား ကိုယျစားလှယျလောငျး အသီးသီးကပုံစံ ၁၉ လကျမှတျရေးထိုးထားပွီးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ မဲစာရငျးအကုနျလုံးကို ပွနျစဈပေးဖို့ ကျောမရှငျကို တောငျးဆိုထားတယျ။ KNDP က ရှုံးသျောလညျးဘဲ ရိုးရိုးသားသား ရှုံးတာဖွဈတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ” ဟု KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၂ တှငျ NLD မှ စောခဈြခငျက ၂၀,၄၉၉ မဲ၊ KNDP မှ မနျးအောငျပွညျစိုးက ၁၉,၁၂၉ မဲ၊ USDP မှ စောစိုးဝငျးက ၁၃,၀၇၆ မဲ၊ တဈသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျ စောကြျောလှငျဦးက ၁,၇၉၇ မဲ၊ UBP မှ ဦးအောငျကိုဝငျးက ၆၉၈ မဲ အသီးသီးရရှိထားကွောငျး မွို့နယျရှေးကျောအဖှဲ့ခှဲ၏ မဲရလဒျ ပုံစံ ၁၉ တှငျ ဖျောပွထားသညျ။ “မဲရလဒျတှကေတော့ ကနြျောတို့ ပုံစံ ၁၉ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ အဲ့အတိုငျးပါပဲ လာကွညျ့ လို့ရပါတယျ” ဟု လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇျောညှနျ့က ပွောသညျ။ လှိုငျးဘှဲ မွို့နယျတှငျ ကြေးရှာမြား ၌ မဲလာပေးသူမြားအနဖွေငျ့ မဲပေးမှုပုံစံကို သသေခြောခြာ မသိသညျ့အတှကျ ပယျမဲမြားသညျကို တှရေ့သညျဟု ရှေးကောကျပှဲ စောငျ့ကွညျ့ သူတဈ ဦးက ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%80%e1%80%9b %e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ အမျးမွို့နယျ ရှောကျခွုံကြေးရှာအတှငျးသို့ နိုဝငျဘာလ ၁၀ ရကျ ညနေ ၇ နာရီခနျ့က လကျနကျကွီးကညျြ တလုံးကရြောကျ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ကလေး ၂ ဦးအပါအဝငျ ရှာသား ၆ ဦးဒဏျရာရှိခဲ့ကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ ရှောကျခွုံကြေးရှာမှ ဒဏျရာရသူ ဒျေါတငျမနေနျး၏ ယောကျမ တျောစပျသူ ဒျေါခြိုခြိုသနျးက “ ကဇုကိုငျးဘကျကနေ လကျနကျကွီး ကညျြ ၁ လုံးက ဦးဌေးဝငျး အိမျရှကေ့ သဈပငျကိုကရြောကျ ပေါကျကှဲပွီးတော့ ကညျြစတှေ လှငျ့စငျ ပွီးတော့ လာထိတာ။ အဲဒီမှာ တအိမျတညျးက ၃ ယောကျက ထမငျးစားဖို့ ဆိုပွီးတော့ လုပျနရေငျးထိမှနျတာ။ တခွား နအေိမျက ၁ ယကျေအပွငျ လမျးမှာ သှားနသေူ ၂ ယောကျတို့မှာလညျး ကညျြစတှေ ထိမှနျပွီးတော့ ဒဏျရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ကွတာ ” ဟု ပွောသညျ။ နံနကျပိုငျးတှငျမူ ရှောကျခွုံကြေးရှာနှငျ့ ၅ ဖာလုံအကှာအဝေးတှငျ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျး ကညျြစထိမှနျမှုကွောငျ့ အသကျ ၃ နှဈအရှယျ မတိုးတိုးတှငျ ဘယျခွထေောကျ၊ အသကျ ၆ နှဈအရှယျ မောငျလငျး လငျးခတြှေငျ ကြောကုနျးနှငျ့ ညာဘကျ လကျမောငျး၊ ၊ အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျ မောငျမောငျတှငျ ညာဘကျဘေးစ၊ အသကျ ၁၅ နှဈအရှယျ ကိုလှမငျးတှငျ ဦးခေါငျးနှငျ့ ညာတငျပါး၊ အသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ ဒျေါတငျမနေနျးတှငျ ခွထေောကျဒူးဆဈ နှဈ ဘကျစလုံးနှငျ့ ၅၄ နှဈအရှယျ ဦးခငျမောငျတှငျ ခါးဆဈနှငျ့ ညာဘကျပေါငျတို့တှငျ ဒဏျရာအသီးသီး ရရှိခဲ့ကွခွငျး ဖွဈသညျ။ ယငျးလူနာမြားကို လကျရှိတှငျ မွပေုံမွို့နယျ၊ ကမျးထောငျးကွီးမွို့ ဆေးရုံတှငျ ဆေးကုမှုခံယူနရေပွီး လကျရှိတှငျ ယငျး အထဲ မှ ၃ ဦးမှာ ဒဏျရာပွငျးထနျသညျ့ အတှကျ စဈတှဆေေးရုံကွီးတှငျ ဆေးကုသမှုခံယူရနျ လိုအပျနကွေောငျးလညျး ကမျးထောငျးကွီးဒသေခံမြား ထံမှ သိရသညျ။ ကမျးထောငျးကွီးမွို့နာရေးကူညီမှုအသငျးမှ ဦးဝငျးလှအောငျက “ ခါးဆဈမှာ ဒဏျရာသူ ဦးခငျမောငျနဲ့ တငျမနေနျးမှာ ခွထေောကျ ဒူးဆဈကြိုးသှာတဲ့ ပုံပေါကျနပွေီး ကနျြဒဏျရာ ပွငျးထနျသူ စုစုပေါငျး ၃ ဦးကို စဈတှမှော ကုသဖို့လိုအပျမယျ။ ကနျြ ၃ ယောကျကိုတော့ ကမျးထောငျးကွီး ဆေးရုံမှာ ကုသလို့ ရမယျ ” ဟုပွောသညျ။
အမျးမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျဌေး က “ ဒသေခံ ၆ ဦးဒဏျရာရတာကို သတငျးကွားတယျ။ ကနြျော မနကေ့ စဈတှကေို လာတုနျးကတော့ ကားလမျးမထကျ ခွောကျခွုံနဲ့ ကဇုကိုငျး တံတားနားတှမှော တပျမတျောသား တှေ ဟိုတစု ဒီတစုတော့တှခေဲ့ ရတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈ၊ မဖွဈနဲ့ အဲဒီကိစ်စ အသေးစိတျကိုတော့ ကနြျောလညျး မပွောနိုငျဘူး” ဟု ဆိုသညျ။ အမျးမွို့ခံ ကိုမြိုးလှငျက “ အပွဈမဲ့ အရပျသားတှေ နထေိုငျတဲ့ ကြေးရှာတှကေို လကျနကျကွီးကညျြထိမှနျ အောငျလှမျးပဈမှုတှဟော ကြေးရှာသားတှရေဲ့ အသကျလုံခွုံမှုကို အလှနျတရာ ခွိမျးခွောကျမှုဖွဈနတေယျ။ ကိုယျ့အိမျမှာ နထေိုငျရငျးနဲ့ အကာအကှယျ မဲ့နကွေရတာ စိတျမကောငျးစရာပဲ ” ဟု ဆိုသညျ။ https://burma.irrawad dy.com/news /2020/11/11/233242.html
မန်တလေးတိုငျး၊ မိုးကုတျမွို့အနီးက ကြေးရှာတှကေို TNLA တအာငျးတပျဖှဲ့ရဲ့ စဈကွောငျးတှကေ နိုဝငျဘာ ၇ ရကျမှာ စတငျ ရောကျရှိလာပွီး ရှာအတှငျး ယာယီစခနျးခကြာ ရိက်ခာနဲ့ ငှကွေေးတောငျးခံတာတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ဒသေခံရှာသားတှေ မိုးကုတျမွို့ထဲကို တိမျးရှောငျလာကွတယျလို့ မကျြမွငျသကျသေ ဒသေခံတှကေ ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။
“TNLA တပျဖှဲ့တှေ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီ တဈရကျအလို နိုဝငျဘာလ ၇ ရကျနကေ့ စရောကျလာတဲ့ သူတို့ရောကျနတေဲ့ ရှာတှမှော ရိက်ခာတောငျးတယျ။ ကြောကျလုပျကှကျတှကေိုလညျး ဆပျကွေးတောငျးတယျ။ ပွီးတော့ မိုးကုတျမွို့အတှငျး က လောငျးကစားဒိုငျအမြိုးသမီးကို ဆိုငျကယျတဈစီး လူနှဈယောကျနဲ့ အဓမ်မလာဖမျးချေါသှားပွီး သိနျး ၅၀၀ နဲ့ ပွနျရှေးခိုငျး တယျ။ သိနျး ၂၅၀ နဲ့ ပေးလိုကျမှ ပွနျလှတျပေးတယျ။ မွို့အတှငျးလညျး ဆပျကွေးတှေ လိုကျကောကျနေ တယျ”လို့ ဒသေခံ ကိုမငျးမငျး ကပွောပါတယျ။ TNLA တအာငျးတပျတှေ ရောကျရှိလာပွီး ယာယီစခနျးခနြတေဲ့ ကြေးရှာတှကေတော့ ပိနျးပွဈအထကျရှာ၊ ပိနျးပွဈအောကျရှာ၊ ခြောငျးကွီးကုနျးစံရှာ၊ ခြောငျး ကွီးကြောကျဝါရှာ၊ ခြောငျးကွီးမာနားအလယျရှာ၊ ခြောငျးကွီးကုနျးစံရှာတှဖွေဈပါတယျ။ အဲ့ဒီကြေးရှာတှကေ ပွညျသူတှဟော စိုးရိမျးထိတျလနျ့ပွီး မိုးကုတျမွို့ထဲကို တိမျးရှောငျ နကွေပါတယျ။
“ကနြျောတို့ မိုးကုတျဒသေဟာ အဖွူရောငျနယျမွပေါ။ ဒီလို TNLA စဈကွောငျးလာတာမရှိခဲ့ဘူးဗြ။ ဆပျကွေးကောကျ ရိက်ခာတောငျးတာလညျး မကွုံဖူးဘူး။ ဒီတော့ စိုးရိမျထိတျလနျ့ပွီး မွို့ထဲက အမြိုးအိမျတှမှော လာနကွေတာပါ။ မကွောကျ တဲ့သူတှကေတော့ မတိမျးရှောငျဘဲရှာမှာ နနေကွေတာလညျးရှိ တယျ။” လို့လညျး ဒသေခံတဈဦးကပွောပါတယျ။ TNLA တအာငျးတပျဖှဲ့က မွို့အတှငျးဝငျရောကျပွီး ငှကွေေးကောကျခံတာ အဓမ်မဖမျးဆီးချေါဆောငျတာတှေ ရှိနတောကွောငျ့ မိုးကုတျမွို့ပျေါမှာနထေိုငျတဲ့ ပွညျသူလူထုတှလေညျး စိုးရိမျထိတျလနျ့စိတျတှေ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး TNLA တအာငျးတပျဖှဲ့ရဲ့ ပွနျကွားဌာနမှူး ဗိုလျမှူးတာအိုကျကြျောကို ဆကျသှယျ အတညျပွုဖို့ ခကျခဲနပေါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/archives/423328
၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီမြားရှုံးနှိမျ့ခဲ့သညျ့အခကျြမြားအနကျ သတငျးတုသတငျးမှားဖွငျ့ ပွောဆို တိုကျခိုကျခံရမှုသညျ အခကျြတဈခကျြဖွဈခဲ့သညျဟု ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPP ၏ ဒု-ဥက်ကဌ ဒျေါဒှဲဘူက ပွောဆိုခဲ့ သညျ။“ကမြတို့စညျးရုံးရေးကာလ ပွီးဆုံးခြိနျလောကျမှာ အမြားကွီးတိုကျခိုကျခံခဲ့ရတယျ။ အဲ့ဒါက USDP နဲ့ ခြိတျဆကျထား တယျပေါ့။ အဲ့ကရတဲ့ ဝငျငှတှေနေဲ့ စညျးရုံးရလေုပျကွတယျ။ အဲ့လိုတှလေိုကျပွောပွီး မဲဆှယျတော့ အောကျခွကေ လူတနျး စားတှကေ နားလညျ ပေးဖို့အရမျးခကျခဲတယျ။ သူတို့စိတျထဲမှာ မဲ မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတျက ရှိသှားတယျ။ အဲဒါက လူထုနဲ့ တှဆေုံ့တဲ့ အခါမှာ ပိုဆိုးတယျ။ စညျးရုံးရေးမှာတှတေဲ့လူတိုငျးနဲ့ဖွရှေငျးရတယျ။ နောကျပွီးတိုကျခိုကျခံရတာက တဈခကျြ တညျး မဟုတျဘူး။ ပူတာအိုလို USDP အားကောငျးတဲ့ ဒသေမှာဆိုရငျ ကအေိုငျကနေဲ့ပတျသကျတယျလို့ပွောဆိုခံရတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရှုံးနဲ့ပဲရငျဆိုငျရတယျလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာ ခကျအောငျက ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမှီတဈပတျခနျ့အလို ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျ ခရီးစဉျ အတှငျး ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ – KSPP က ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ USDP နှငျ့မဟာမိတျဖှဲ့မညျ့ ပါတီဖွဈသညျဟု ဆှမျပရာဘှမျမွို့မှ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျတဈခြို့ကို ပွောဆိုခဲ့သညျဟု ဝဖေနျမှုမြားစှာလညျး ရှိခဲ့သညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ဝနျကွီးခြုပျခကျအောငျက USDP နဲ့ KSPP ပတျသကျနသေညျ့ အကွောငျးမြားကို ပွောဆိုမှုမရှိခဲ့ သလို မဲဆှယျစညျးရုံးခဲ့ရာတှငျလညျး “KSPP ကိုမဲထညျ့ရငျဘာအကြိုးရလဒျရမလဲ။ NLD ကိုမဲထညျ့ရငျဘာအကြိုးခံစားခှငျ့ ရမလဲ။ USDP ကိုမဲထညျ့ရငျ မငျးတို့အတှကျ ဘာရမလဲ” စသောအခကျြမြားသာ ပွောဆိုခဲ့ကွောငျး နိုဝငျဘာလ ၅ ရကျနေ့ ကွိုတငျမဲလာထညျ့ရာတှငျ မီဒီယာမြားကို ဖွကွေားခဲ့သညျ။ နိုဝငျဘာလ ၈ရကျနပွေု့လုပျခဲ့သညျ့ ရှေးကောကျပှဲကွီးတှငျ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPP က ကခငျြပွညျနယျ အတှငျး ရှိ ပွညျနယျလှတျတျောအတှကျ ၃ နရောနှငျ့ ပွညျသူ့ လှတျတျောအတှကျ ၁ နရောသာ အနိုငျရခဲ့သညျ။ https://burmese.Kachinnews.com/2020/11/10/%e1%80%9e %e1%80%90% e1%80%84%e1%80%ba%e1
နိုဝငျဘာ (၈) ရကျ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ပွီးနောကျ အစိုးရ တပျမတျောသညျ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးရှိ သြှမျးပွညျ ပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော ( RCSS/SSA) လှုပျရှားရာ နယျမွသေို့ စဈအငျအားဖွညျ့ လှုပျရှားနေ ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ပငျလုံ၊ နမျ့စနျ၊ လငျးခေး၊ ကြိုငျးတောငျး ဒသေမြားသို့ အစိုးရတပျမတျော စဈအငျအား ဖွညျ့ဆညျးနေ သညျ့အပျေါ ပွညျသူမြားစိုးရိမျနကွေောငျး လညျး RCSS/SSA သတငျးဝကျဆိုဒျဖွဈသညျ့ Tai Freedom တှငျ ရေးသားထား သညျ။ ထိုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က “ သတငျးကိုတော့ ကနြျောတို့ကွားနရေတယျ။ ဒါပမေယျ့ သတငျးအခကျြအလကျ အသေးစိတျတော့ ကနြျောတို့မသိရှိရသေးဘူး”ဟု သြှမျးသံ တျောဆငျ့ကိုပွောသညျ။ လကျရှိအခွအေနတှေငျ တိုကျပှဲမဖွဈပှားသျောလညျး ဒသေခံ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ တိုကျပှဲဖွဈပှား မညျကို စိုးရိမျနကွေောငျး လညျး သိရသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာ ၂၇ ရကျ ကလညျး လငျးခေးခရိုငျတှငျ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့အဖှဲ့ မိုငျးပနျမွို့နယျသို့ မဲရုံဝနျထမျးနှငျ့ မဲရုံ ပစ်စညျးမြား သှားပို့ဆောငျပွီး အပွနျလမျးတှငျ RCSS/SSA မှ အဆိုပါယာဉျကို ပဈခတျရာ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့အရာရှိ တို့ကညျြဆံထိမှနျဒဏျရာရခဲ့သညျ။ RCSS/SSA သညျ တနိုငျငံလုံး ပဈခတျရပျစဲရေးသဘောတူညီစာခြုပျ (NCA) လကျမှတျ ရေးထိုးထားသညျ့ အဖှဲ့တဖှဲ့ဖွဈပွီး၊ NCA လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျမှာ (၅)နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ https://burmese.shan news.org/archives/19440
ဝိုငျးမျောမွို့နယျ မွဈကွီးနား-ဗနျမျော လမျးမကွီးပျေါရှိ တိုကျပှဲကွောငျ့ ၁၀နှဈခနျ့စှနျ့ခှာထားသညျ့ ဒဘတျယာနျကြေးရှာတှငျ နရေပျပွနျအခွခေနြိုငျရနျအတှကျ ဒသေခံစဈမှနျကွောငျးစဈဆေးမှုမြား စတငျလုပျဆောငျနပွေီဟု သိရသညျ။ နိုဝငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့စ၍ ဝိုငျးမျောမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး(လ.ဝ.က)၊ မွစောရငျးအဖှဲ့မြားနှငျ့အတူ ကခငျြ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှုအဖှဲ့(KHCC) တို့က ဒဘတျယာနျကြေးရှာသို့သှားရောကျစဈဆေးကာ နရေပျပွနျမညျ့ စဈရှောငျမြား၏ အမညျစာရငျးမြား ကောကျခံခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ မွဈကွီးနားနှငျ့ဝိုငျးမျောမွို့အတှငျးရှိ နရေပျပွနျမညျ့ ဒသေခံ အိမျထောငျစု ၂၀၀ကြျောကလညျး အမညျစာရငျး သှားရောကျပေးသှငျးနကွေပွီဖွဈသညျ။
ထို့အပွငျ လုံခွုံရေးအတှကျ ကြေးရှာအတှငျး မိုငျးရှငျးလငျးရေးလုပျငနျးမြားကိုလညျး စတငျလုပျဆောငျတော့မညျဖွဈကွောငျး KHCC မှ ဆရာခါးလီက ယခုလိုပွောဆိုသညျ။“ဒီနကေ့တော့ အားလုံးရဲ့အမွငျမှာ နရေပျပွနျနိုငျပွီလို့ တကျရောကျသှား အောငျ ဒဘတျယာနျကြေးရှာမှာဘဲ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့တှနေဲ့အတူ စဈရှောငျတှရေဲ့ နရေပျပွနျမယျ့ အမညျစားရငျးတှေ ကောကျခံခဲ့တဲ့သဘောပါ။ မနကျဖွနျမှစ၍ စဈရှောငျတှရေဲ့အိမျခွံဝနျးတှစေီစဈမယျ။ ပွီးရငျမိုငျးရှငျးလငျးရေးတှေ စလုပျတော့ မညျဖွဈတယျ။ တခွားစဈရှောငျနရော တှငျမှာလညျး လုပျကိုငျနတောရှိတဲ့အတှကျ ဒီမှာ မိုငျးရှငျးလငျးရေးက ၁ ပတျ လောကျကွာမယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။“စီစဈမယျ၊ မိုငျးရှငျးလငျးအပွီးက ဒီလ ၂၅ ရကျနောကျအကဆြုံး သတျမှတျထား တယျ။ ဒါပွီးဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး တှကေိုဆကျတိုကျလုပျဆောငျသှားမယျ။ လာမယျ့ ဖဖေဝါရီလ ကုနျပိုငျးတော့ အကုနျ ပွီးစီး အောငျမြှျောလငျ့ထားတယျ။ ပွီးမှ စဈရှောငျတှနေရေပျပွနျနိုငျပါပွီ”ဟု ပွောဆိုသညျ။
“ကနြျောတို့အနနေဲ့ ကြေးရှာအထကျဘကျမှာရှိတဲ့ အိမျထောငျစု ၃၇ စုကိုအရငျစရှငျးပေးမှာဖွဈတယျ။ ပွီးမှ နောကျအုပျခြုပျ ရေးမှူးတှပွေောတဲ့အတိုငျး အုပျခြုပျရေးရုံးနဲ့ကြောငျးစာသငျကြောငျးတှေ စရှိသဖွငျ့ အစိုးရအဆောကျအုံ တှကေို ပွနျရှငျးမှာ ဖွဈတယျ။ ဒါပွီးမှသာ ဒသေခံတှနေတေဲ့ နအေိမျအဆောကျအဦးတှကေို ပွနျရှငျးပေးမှာဖွဈတယျ။ တဈရကျကို အိမျထောငျစု အမြားဆုံး ၆ ခုလောကျရှငျးပေးသှားမယျဖွဈတယျ”ဟု မိုငျးရှငျးလငျးရေးအဖှဲ့မှ တပျမတျောအရာရှိ တဈဦးက စဈရှောငျမြား ကို ပွောဆိုသှားခဲ့သညျ။ နရေပျပွနျမညျ့ ဒဘတျယာနျစဈရှောငျပွညျသူမြားက လကျရှိတှငျမွဈကွီးနားနှငျ့ ဝိုငျးမျောမွို့ရှိ စဈရှောငျစနျး ၁၇ခုတှငျ ခိုလှုံနသေူမြားဖွဈကာ လူဦးရေ ၇၀၀ ကြျောနှငျ့ အိမျထောငျစု ၂၀၀ ကြျောရှိသညျ။ KHCC သညျ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး လုံခွုံမှုနှငျ့ နရေပျပွနျသငျ့သညျ့ ကြေးရှာ ၁၇ ခု ကိုရှေးခယျြခဲ့ကွပွီး လကျရှိတှငျ ရှညေောငျပငျ ကြေးရှာတဈခုတညျးသာ နရေပျပွနျပို့ပေးနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော တဖကျတှငျ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး အပဈခတျရပျဆဲရေး လကျမှတျရေးထိုးထားခွငျးမရှိသေးပေ။ https://burmese.kachinn ews.com/2020 /11/12/l2-25/
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၏ ကိုယျရေးအရာရှိဟောငျး ဦးလငျးဇျောထှနျးအပါအဝငျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီမှ ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြား အနိုငျရရှိခဲ့သော မိုငျးဖွတျမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျတှငျ ရှေးကောကျပှဲနေ့ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့က မဲဆန်ဒရှငျမြားကို ရှာလုံး ကြှတျ ကားအကွိုအပို့လုပျ၍ မဲထညျ့ခိုငျးမှုမြားရှိခဲ့ကွောငျး မိုငျးဖွတျမွို့နယျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့သော SNLD ၏ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးကဖြကေ့ ရနျကုနျခတျေသဈသတငျးဌာနသို့ ပွောဆိုသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ ရှေးကောကျပှဲနေ့ အပါအဝငျ ကွိုတငျမဲမြား ကောကျယူရာတှငျ မမှနျမကနျ လုပျဆောငျမှုမြားကို တှမွေ့ငျရကွောငျး ဦးကဖြကေ့ ဆိုသညျ။“တခြို့မဲရုံတှမှော ကျောမရှငျဥပဒနေဲ့ တိတိကကြမြှနျမှနျကနျကနျဆောငျရှကျတာ တှရေ့ပါတယျ။ တခြို့မဲရုံကတြော့ မဲရုံမှူးကိုယျတိုငျက ဒါထုပါ၊ ဒါထညျ့ပါဆိုပွီး ဆန်ဒပွုခနျးအထိသှားပွီးမှ တဈဦးခငျြးလိုကျပါ ဆောငျရှကျပေးနတော တှမွေ့ငျရပါတယျ။ နောကျတခြို့မဲရုံကတြော့ ဆန်ဒပွုခနျးက လြှို့ဝှကျဆန်ဒပွုခနျးမဟုတျဘဲနဲ့ အမြား ပွညျသူ လူလာတဲ့ဘကျကို လှညျ့ထားတဲ့ပုံစံကွီးဖွဈနတေယျ။ နောကျ မဲဆန်ဒရှငျတှကေို ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့မှ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ တိုကျစဈမှုးတှရှေိပါတယျ။ အဲဒီ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့တှကေ ကြေးရှာသားတှကေို သူတို့ပါတီကို မဲပေးရမယျဆိုပွီး ကားအကွိုအပို့ လုပျပေးနတေယျ။ တဈရှာပွီးတဈရှာလေ။ သူတို့က ကွံ့ခိုငျရေးပေါ့”ဟု ဦးကဖြကေ့ ရှငျးပွသညျ။ ဦးကဖြကေ့ လတျတလော ရှေးကောကျပှဲတှငျ မသာမှုမြားလုပျဆောငျသော အထောကျအထားမြားကို စုဆောငျးလကျြရှိပွီး SNLD ပါတီနှငျ့တိုငျပငျကာ ရှေး ကောကျပှဲကျောမရှငျထံသို့ မကွာမီတိုငျကွားမှုမြားလုပျဆောငျမညျဖွဈကွောငျး ပွောဆိုသညျ။ ရှမျးပွညျနယျ၊ မိုငျးဖွတျ မွို့နယျတှငျ နမျ့ယှနျး ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ တဈခု အခွေ စိုကျလှုပျရှားလကျြရှိသညျ။
မိုငျးဖွတျမွို့နယျတှငျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီမှ တပျခြုပျ၏ ကိုယျရေးအရာရှိဟောငျးလညျးဖွဈ ဗိုလျမှူးဟောငျးလညျးဖွဈ ဦးလငျးဇျောထှနျး က ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈလညျးကောငျး၊ ဦးညှနျ့ဝငျး က မဲဆန်ဒနယျအမှတျ ၁ ၏ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ အဖွဈလညျးကောငျး၊ ဦးဖရနျစဈကိုဈ အမှတျ ၂ ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ အဖွဈလညျးကောငျး အနိုငျရရှိခဲ့သညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/11/%e1%80%90%e1%80%95% e1%80%ba%e1%80%81%e1%80
မွမွှေုပျမိုငျးဗုံးတှကေို သူပုနျအုပျစုတှကေ အသုံးပွုမှုတှေ မြားပွားလာတာနဲ့ စဈပှဲလကျကနျြ ပေါကျကှဲရေး ပစ်စညျးတှေ ကွောငျ့ အရပျသားတှေ သဆေုံး ဒဏျရာရရှိမှုနှုနျး ပိုမြားလာတယျလို့ မွမွှေုပျဗုံးအသုံးပွုမှုကို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာတဲ့ Landmine Monitor အဖှဲ့ ရဲ့ နောကျဆုံး ထုတျပွနျတဲ့ အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
အကောငျအထညျဖျောဖို့ အခကျအခဲတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ ၁၉၉၉ ခုနှဈ မွမွှေုပျမိုငျးဗုံးဆိုငျရာ နိုငျငံတကာ သဘောတူစာခြုပျဟာ အောငျ မွငျမှုတှေ ရှိနတေယျလို့လညျး Landmine Monitor အဖှဲ့ က ပွောပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှရေဲ့ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈတဲ့ နိုငျငံပေါငျး ၁၆၄ နိုငျငံက မွမွှေုပျမိုငျး ထုတျလုပျ၊ သိုလှောငျ၊ အသုံးပွုမှုကို ပိတျပငျတဲ့ ဒီစာခြုပျကို လကျမှတျရေးထိုးထား တာပါ။ ဒါ့အပွငျစာခြုပျ ကို လကျမှတျရေးထိုးမထားတဲ့ နိုငျငံ ၃၃ နိုငျငံကလညျး လိုကျနာမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ စာခြုပျကို လကျမှတျရေး မထိုးထားတဲ့ နိုငျငံတှထေဲက မွနျမာနိုငျငံ တဈနိုငျငံတညျးမှာသာ ၂၀၁၉ ခုနှဈလယျက ၂၀၂၀ အောကျတိုဘာ လအထိ မွမွှေုပျဗုံး အသုံးပွုမှုကို တှရှေိ့ရတယျလို့ အစီရငျခံထားတာပါ။
အဲဒီ ကာလအတှငျးကမ်ဘာတဈဝှမျး မွမွှေုပျဗုံးတှကွေောငျ့ သဆေုံး ဒဏျရာရသူ ခနျ့မှနျးခွေ အယောကျ ၅,၅၀၀ ထဲက ၂,၂၀၀ အသကျ သဆေုံးရပွီး လူ ၃,၃၅၇ ဦးဒဏျရာရတယျလို့ Landmine Monitor ရဲ့သုတသေနအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျ Lorne Persi က VOA ကိုပွော ပါတယျ။ “သဆေုံးသူနဲ့ ဒဏျရာရရှိသူ အခြိုးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒဏျရာရသူ ဦးရကေ အဆမတနျ မြား ပွားတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးတှေ့ မွငျနိုငျကွောငျး၊မွမွှေုပျမိုငျးနဲ့ စဈပှဲလကျကနျြ ပေါကျကှဲစတေဲ့ ပစ်စညျးတှကွေောငျ့ ဒဏျရာရရှိသူတှကေို အပွညျ့အဝမှတျတမျးတငျထားနိုငျခွငျး မရှိကွောငျး” Landmine Monitor အဖှဲ့က သုတသေနပညာ ရှငျ Persi က ပွောပါတယျ။ မွမွှေုပျမိုငျး ပိတျပငျတဲ့ စာခြုပျ အသကျဝငျကတညျးက စာခြုပျ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှေ သိုလှောငျ သိမျးဆညျးထားတဲ့ လူထောငျ မွမွှေုပျ မိုငျး ၅၅ သနျးကြျောကို ဖကျြဆီးနိုငျခဲ့ပွီး မိုငျးရှငျးလငျး ဖကျြဆီးရေး လုပျငနျးတှမှော လညျး တိုးတကျမှုတှေ ရရှိနတေယျလို့လညျး Landmine Monitor က အစီရငျခံထားပါတယျ။ https://burmese.voanew s.com/a/myanmar-landmine-monitor-report-/5659202.html
၁၅။ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး အနျအယျလျဒီအပါအဝငျ အားလုံးနှငျ့ပူးပေါငျးမညျဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျပွော
တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးတှအေပါအဝငျ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံဖွဈဖို့အတှကျ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒကေို ပွငျဆငျရမှာ ဖွဈပွီး တဈစုတဈဖှဲ့တညျးမပွငျနိုငျတာမို့ အနျအယျလျဒီ အပါအဝငျ အားလုံးနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ရေးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျသူ့လှတျတျောနရောအတှကျ အနိုငျရရှိခဲ့သူ မှနျညီညှတျရေးပါတီမှ ဒေါကျတာ ဗညားအောငျမိုးက ပွောပါ တယျ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ဆကျလကျကငျြ့သုံးသှားဖို့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ နိုငျငံရေး လုပျနတောမဟုတျဘဲ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေး၊ တနျးတူရေးနဲ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ အတှကျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ပွငျဆငျရမှာဖွဈတယျလို့ သူက ဆိုပါတယျ။
“တကယျတမျးတိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေး၊ အမြိုးသားအခှငျ့အရေးနဲ့ပတျသကျလို့ အပွညျ့အဝ အကောငျအထညျဖျောရမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ အခွခေံဥပဒပွေငျရမယျ၊ အခွခေံဥပဒကေ တကယျ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီပုံစံ၊ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံ ထူထောငျတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံ ဖွဈအောငျ ဒါကို ကနြောတို့ ပွငျရမယျ၊ အဲ့လိုပွငျတဲ့နရောမှာ တဈစုတဈဖှဲ့တညျး မပွငျနိုငျဘူး၊ အနျအယျလျဒီ ပါတီထဲလညျး မပွငျနိုငျဘူး၊ ဒါ သခြောတယျ။ နောကျပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားပါတီ တှစေုပေါငျး ပွီး ပွငျမယျဆိုရငျလညျး ဒါလညျး မပွငျနိုငျဘူး၊ ကနြျောတို့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အားလုံး အနျအယျလျဒီပါတီနဲ့ အခွား ပွညျထောငျစု အဆငျ့ရှိတဲ့ပါတီမြားနဲ့ အားလုံး ပူးပေါငျးရမယျ၊ ညှိနှိုငျးရမယျ၊ တပျမတျော အဓိက အရေးကွီးတယျ၊ တပျမတျောကိုလညျး ညှိနှိုငျးရမယျ၊ တပျမတျောရဲ့ သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံက ဘယျလိုမှ ပွငျလို့မရဘူး” လို့ ဒေါကျတာ ဗညားအောငျမိုးက ပွောပါတယျ။
ငွိမျးဖောငျဒေးရှငျးအကွံပေးအဖှဲ့ဝငျ ဦးလှငျကတော့ “တိုငျးပွညျတဈပွညျမှာ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ ဆိုတာ ပါတီအနိုငျရဖို့ ကိုယျ့ နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ကွိုးစားကွတယျ၊ အနိုငျရရငျတကျလာတဲ့ အစိုးရ ဆိုတာရှိတယျ၊ ကိုယျစားလှယျအားလုံးက တကျလာတဲ့ အစိုးရက ကိုယျ့အစိုးရဆိုပွီးတော့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှသာလြှငျ တိုငျးပွညျ တိုးတကျမှာပါ၊ တိုငျးပွညျတိုးတကျဖို့အတှကျ ဝိုငျးလုပျကွရမှာပါ၊ နိုငျငံရေးမှာ ထာဝရရနျသူ ထာဝရမိတျဆှဆေိုတာ မရှိပါဘူး ” လို့ သူ့ရဲ့အမွငျကို ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ရေးမွို့နယျအတှငျးယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီအနနေဲ့ ကြေးရှာတှကေ ဆန်ဒမဲအမြားစုနဲ့ ကိုယျစား လှယျ ၅ နရောလုံးမှာ နရောပွညျ့ အနိုငျရခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/423691
ကခငျြပွညျနယျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျတို့၏ လီဆူ တိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီး၂ နရောကို လီဆူ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (LNDP) မှ အနိုငျ ရရှိသညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ LNDP ပါတီ၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးရှမေငျး (ခ) ဦးဆီဖာလာလူးသညျ ကခငျြပွညျနယျ၏ လီဆူ တိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး နရော၊ ဦးဂူဆာက ရှမျးပွညျနယျ၏ လီဆူတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးနရောတှငျ NLD ပါတီကို မဲအပွတျအသတျဖွငျ့ ကြျောတကျ ကာ အနိုငျ ရရှိနခွေငျး ဖွဈသညျ။ ဦးရှမေငျးက “ကနြျောက မဲ၂ သောငျးကြျော ရထားတာပါ။ NLD ထကျ မဲပေါငျး ၉၀၀၀ ကြျော မြားပါတယျ။ ဦးဂူဆာ က တော့ မဲ ၁၀၀၀ ကြျောလောကျ အသာစီး ရထားတာလို့ ပွောပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။ ဦးရှမေငျးနှငျ့ ဦးဂူဆာ၏ မဲရလဒျမြားမှာ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) မှ အတညျပွုထားခွငျး မရှိသေး သျောလညျး မဲရုံမြားမှ မဲရလဒျမြားကို ရတှေကျပွီးသညျ့ ရလဒျ အပျေါတှငျ အနိုငျအရှုံး တှကျခကျြထားခွငျး ဖွဈသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျပါတီ (NLD) ၏ ပွညျနယျ အောငျနိုငျရေး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးဗိုလျကလညျး ကခငျြပွညျနယျ၏ လီဆူတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးနရောတှငျ NLD က ရှုံးပွီး ဦးရှမေငျးက အနိုငျရသှားပွီဟု အတညျပွု ပွောဆိုသညျ။ ဦးရှမေငျးက “ကနြျောတို့က ကိုယျ့ရဲ့ အမြိုးသားရေးကို ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျတာက ကိုယျ့ရဲ့ လီဆူအမြိုး သား ပါတီပဲ ဖွဈတယျ။ မိခငျပါတီ အနိုငျရတယျလို့ ပွောလို့ ရပါတယျ။ ကနြျောတို့ ပါတီရဲ့ အမြိုးသားရေး လုပျဆောငျနိုငျမှု အားက ကနြျောတို့ လူမြိုးထဲမှာ အရေးပါဆုံး ဖွဈနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ ရတာလို့ ပွောခငျြပါတယျ” ဟု ပွော သညျ။ LNDP မှ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကခငျြပွညျနယျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျတှငျ၂၉ နရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရာ တိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီး ၂ နရောနှငျ့ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ (၁) တှငျသာ အနိုငျရရှိခွငျး ဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/11/10/233191.html
တနိုငျငံလုံးရှိ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ အားလုံးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိသညျအထိ ဆှေးနှေးရနျ ဗိုလျခြုပျကွီးမြား ဦးဆောငျသညျ့ အမွဲတမျးကျောမတီ ၁ ခုကို တပျမတျောက နိုဝငျဘာ ၉ ရကျနကေ့ ဖှဲ့စညျးလိုကျသညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့၊ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက “ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး အောငျမွငျပွီးဆုံးသညျ အထိ လိုအပျလြှငျ လိုအပျလို့ တပျမတျောနဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမယျဆိုရငျ ဖှဲ့လိုကျတဲ့ Permanent (အမွဲတမျး) အဖှဲ့အစညျး ဖွဈတယျ။ အဲဒီလုပျငနျးကိုပဲ အာရုံစိုကျလုပျနိုငျအောငျလို့ Permanent ဖှဲ့လိုကျတာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ ကျောမတီ၏အမညျမှာ တပျမတျော၏ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှုကျောမတီ ဖွဈပွီး ဥက်ကဋ်ဌ အဖွဈ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရာပွညျ့၊ အတှငျးရေးမှူးအဖွဈ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးအောငျလငျးဒှေးတို့ ဖွဈပွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျ၊ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး တငျမောငျဝငျးနှငျ့ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနောငျတို့မှာ ကျောမတီ၏ အဖှဲ့ဝငျမြား ဖွဈသညျ။ ထိုအမွဲတမျး ကျောမတီတှငျ ပါဝငျသညျ့ ဗိုလျခြုပျကွီးမြားမှာ အစိုးရ ဦးဆောငျနသေညျ့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာန (NRPC)၊ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျ(PC) တို့၏ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှု တပျမတျောအစုအဖှဲ့ ကိုယျစား လှယျမြား အနဖွေငျ့ ပါဝငျဆှေးနှေး နကွေသူမြား ဖွဈသညျ။
ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး က “သူက ၃ ခုလုပျဆောငျမှာ ဖွဈတယျ။ NCA လမျးကွောငျးအတိုငျးနဲ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးပွီး သား တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးပိုမိုခိုငျမာအောငျလုပျမယျ။ လကျမှတျမထိုးရသေးတဲ့ အဖှဲ့တှလေညျး NCA လကျမှတျ ရေးထိုးပွီး ဆကျလကျ ဆှေးနှေးနိုငျအောငျလို့လညျး ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး ပွီးဆုံးသညျအထိ ဆှေးနှေးသှားမယျ့ Permanent အဖှဲ့အစညျး ဖွဈပါတယျ”ဟုလညျး ပွောသညျ။ တပျမတျောနှငျ့ စဈရေးတငျးမာနဆေဲဖွဈသညျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) ကို ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးရနျ စဉျးစားခကျြ ရှိ၊ မရှိ မေးမွနျးရာ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက အားလုံးအကြုံးဝငျပါကွောငျး၊ အားလုံး နှငျ့ ဆှေးနှေးမညျ ဖွဈပါသညျဟု ဖွဆေိုသညျ။ NCA ထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ ၁၀ ဖှဲ့အနဖွေငျ့လညျး လိုအပျလာပါက တပျမတျော၏ ညှိနှိုငျး ရေးအဖှဲ့က NCA သဘောတူစာခြုပျပါ အခကျြမြားအတိုငျး ၁ ဖှဲ့ခငျြး ဆှေးနှေးပေး မညျဟု ထုတျပွနျထားသညျ။ ယခုအခါ အမွဲတမျးကျောမတီတရပျကို ဖှဲ့စညျးလိုကျပွီဖွဈသဖွငျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာ ၂၁ ရကျက ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ အဖှဲ့မှာ ပကျြပွယျသှားပွီဟုလညျး တပျမတျောထံမှ သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.c om/new s/2020/11/11/233245.html
ရခိုငျပွညျနယျ စဈတှမွေို့နယျ အမွငျ့ကြှနျး ကြေးရှာ၌ ပွီးခဲ့သညျ့ နိုဝငျဘာလ ၅ ရကျက ကွိုတငျပေးရာ မဲစာရှကျတှငျ တံဆိပျတုံး ရိုကျပွီးသား မဲအခြို့ပါသဖွငျ့ မဲပေးသူနှငျ့ မဲရုံတာဝနျရှိသူတို့ကွား အငွငျးပှားမှု ဖွဈစဉျအတှကျ ရပျကြေး တာဝနျရှိ သူတို့ကို ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ဥပဒအေရ အရေးယူရနျ လုပျဆောငျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးသူရိနျထှဋျက “အဲဒီမှာ သူတို့ဘကျကလညျး အား နညျးခကျြ ရှိခဲ့တယျ။ ဒီအားနညျးခကျြကို အခွအေနေ တခု စောငျ့ကွညျ့ပွီး ဥပဒကွေောငျးနဲ့အညီ အရေးယူမှုတှေ ပွု လုပျပေးဖို့ လုပျနတေယျ။ မကွာခငျမှာပဲ တခုခု လုပျဆောငျသှားဖို့ ရှိတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
အမွငျ့ကြှနျးကြေးရှာတှငျ ကွိုတငျမဲပေးရာ၌ မဲမပေးရသေးသညျ့ မဲစာရှကျ ၁၅ ရှကျတှငျ ရခိုငျ့ ဦးဆောငျပါတီ (AFP) ၏ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးဇျောကိုကိုလငျး နရော၌ ကွိုတငျပွီး မဲတံဆိပျတုံး ရိုကျနှိပျထားခဲ့သညျ့ အတှကျ ကွိုတငျမဲပေးခဲ့သူဦးရေ ၃၀၀ ကြျော၏ မဲမြားကို ပယျဖကျြလိုကျကွောငျး၊ ယငျးကြေးရှာရှိ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ အတှငျးရေးမှူးတို့ကိုလညျး တာဝနျမှ ရပျထားလိုကျကွောငျး သိရသညျ။
စဈတှမွေို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစံသာအောငျက “ကနြျောတို့ စိစဈကွညျ့တော့ ရပျကြေးရှေး ကျော ဥက်ကဋ်ဌနဲ့ အတှငျးရေးမှူးတို့ နှဈဦးနှဈဖကျပေါ့လြော့မှုပါတယျ။ ဒါကို ပါတီတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ညှိနှိုငျးရေးကျောမတီက သဘော ထားအရ သူတို့ကိုယုံကွညျမှုမရှိတော့ဘူးဆိုပွီး တာဝနျကရပျစဲခဲ့ပွီးတော့ နောကျလူတှကေို အသဈရှေးခယျြခဲ့တယျ။ လကျရှိမှာ သူတို့တှကေိုကတြော့ ပွညျထောငျစုရှေးကျောရဲ့ သဘောထားကို မေးမွနျးထားတယျ”ဟု ဆိုသညျ။ https://bu rma.irrawaddy.com/election-2020/2020/11/10/233172.html
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ဟိုးပုံးမွို့နယျတှငျ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ ( PNO )ပါတီ ၃နရော အနိုငျရရှိထားကွောငျး စုံစမျးသိရှိ ရသညျ။
ဟိုပုံးမွို့နယျတှငျ ပွညျသူလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဒျေါနနျးခမျးဝါ၊ ပွညျနယျ ၁တှငျ ဦးခှနျမောငျဖွူ နှငျ့ ပွညျနယျ ၂ တှငျ ဦးခှနျစံလငျး တို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ နရောတှငျမသိရှိရသေးကွောငျးသိရ သညျ။“အမြိုးသားလှတျတျော ကတော့ မသိရသေးဘူး။ သူက ဟိုးပုံ၊ ဆီဆိုငျ၊ ပငျလောငျး တို့ကိုပေါငျးရမှာဆိုတော့ အခု တော့ မသိရသေးဘူး”ဟု ဟိုပုံးမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျး အတှငျးရေးမှူးး ဦးအောငျကြျောသူက ပွောသညျ။
ပွညျသူကိုယျစားလှယျ နှငျ့ ပွညျနယျ ၁ နငျ့ ၂ တို့တှငျ အနိုငျရရှိသျောလညျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျး မှ တရားဝငျး ထုတျပွနျကွောညာထားခွငျး မရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19422
ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျမှာ မယေုမွဈအတှငျး ရကွေောငျးသှားလာခှငျ့ကို တပျမတျောက ကနျ့သတျထားတဲ့ အတှကျ ဒသေခံတှေ အခကျတှနေ့ရေတဲ့အကွောငျးကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ ကိုနိုငျကှနျးအိနျက ပွောပွပေးပါ မယျ။
စဈရေးပဋိပက်ခဖွဈပှါးနဆေဲ ရသတေ့ောငျမွို့နယျက မယေုမွဈထဲမှာ ရကွေောငျးသှားလာမှုတှကေို တပျမတျောက ကနျ့သတျစဈဆေးမှုတှကွေောငျ့ သှားရေး၊ လာရေး အခကျကွုံနရေတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အဓိက ဆကျသှယျရေး လမျးကွောငျးတခုဖွဈတဲ့ ရကွေောငျးခရီးမှာ အကနျ့အသတျတှကွေုံနရေတာ တလကြျောလောကျ ရှိနပွေီလို့လညျး ရသတေ့ောငျမွို့နယျ စတေီပွငျကြေးရှာက ဒသေခံတဦးက ပွောပါတယျ။“ရသတေ့ောငျကနေ ပိတျဆို့ ထားလိုကျတယျပေါ့။ အဲဒါ တပျမတျောရကေလေ။ အခုဆိုရငျတလကြျောလာပွီ။ မယေုမွဈပျေါ ပိတျထားတော့ ရသတေ့ောငျ မွို့နယျ မွောကျဘကျပိုငျးနဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ရလေမျးခရီးတှပေိတျသှားတာပေါ့။”ရကွေောငျးသှားလာမှုကို ကနျ့သတျ ထားတဲ့အတှကျ ရသတေ့ောငျနဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှမှော ကုနျစညျစီးဆငျးမှုတှေ ကဆြငျးလာရာက ကုနျဈေးနှုနျး ကွီးမွငျ့ မှုဒဏျ ခံနရေတယျလို့လညျး ဘူးသီးတောငျမွို့ခံ ကိုဝငျးနိုငျ ကပွောပါတယျ။
ရကွေောငျးခရီး အသှားအလာတှေ ကနျ့သတျထားတဲ့အတှကျ ကုနျဈေးနှုနျးကွီးမွငျ့မှု ပွဿနာအပွငျ ကနျြးမာရေးကိစ်စလို အခွခေံ လိုအပျခကျြတှမှောလညျး အခကျအခဲ တှနေ့တေယျလို့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ခှဆုံရှာသူမခငျမြိုးအေးက ပွောပါ တယျ။“အရငျတုနျးကဆိုလို့ရှိရငျ ကွကျသှနျနီ တပိဿကို ၁,၂၀၀၊ ၁,၃၀၀။ အခုဆိုလို့ရှိရငျ ၁,၆၀၀ ဖွဈနပွေီ။ ပွီးလို့ရှိရငျ သင်ျဘော တှေ၊ ဘုတျတှေ မသှားရတော့ စားရသောကျရအခကျခဲဖွဈနပေါတယျ… ဒသေခံတှကေ။ ကနျြးမာရေးကလညျး အဲဒီလိုပါပဲ။ ဘုတျတှေ၊ သင်ျဘောတှေ သှားလို့မရတဲ့အခါ ကလေးမှေးမိခငျတှေ နမေကောငျးတဲ့လူနာတှေ အခုမှာအခကျခဲ ဖွဈနပေါတယျ။”ရကွေောငျးသှားလာမှုတှကေို ကနျ့သတျစဈဆေးနတေယျလို့ ဒသေခံတှရေဲ့ ပွောဆိုခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျ လို့ တပျမတျောဘကျကတော့ တရားဝငျသတငျးထုတျပွနျထားတာ မရှိသလို၊ အခွအေနကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သိရအောငျ မေးမွနျးဖို့ ကွိုးစားရမှာလညျး ဆကျသှယျလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/56 57877.html
၁၉၉၈ ခုနှဈ ပုဒျမ ၅(ည)၊ ပုဒျမ ၁၈၉ တို့ဖွငျ့ ထောငျဒဏျ ၉ နှဈခမြှတျခံရသညျ ဦးကြျောမွငျ့သညျ တနှဈခနျ့အကွာ ၁၉၉၉ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလတှငျ မန်တလေးထောငျမှ ထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားခွငျးဖွဈပွီး ယခုနှဈ စကျတငျဘာ ၂၉ ရကျနညေ့က ရနျကုနျမွို့တှငျ ပွနျလညျဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ ယနခေ့မြှတျလိုကျသညျ့ ပွဈဒဏျအပွငျ ယခငျပွဈမှုကွှေး ကနျြမြားလညျး ကခြံရမညျဖွဈသညျ။
ယငျးအပွငျ ၎င်းငျးအား လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃(၁) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုထားမှုကိုလညျး လာမညျ့ နိုဝငျဘာ ၂၅ ရကျနေ့ ရုံးခြိနျးတှငျ စှဲခကျြတငျမတငျ အမိနျ့ခမြှတျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ရာဇသတျကွီးဥပဒေ ပုဒျမ-၂၂၄ ဖွငျ့ ပွဈမှုထငျ ရှားပါက ကြူးလှနျသူအား ၂ နှဈထိ ထောငျဒဏျတမြိုးမြိုးဖွဈစေ၊ ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျနှဈရပျလုံးဖွဈခမြှတျရမညျဖွဈဟု ပွဌာနျးထားပွီး ကြူးလှနျသူအနဖွေငျ့ ပွဈမှုကွှေးကနျြမြား လညျး ကခြံရမညျဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/short-news/2020/11/12/233261.html
ကခငျြပွညျနယျ ပူတာအိုခရိုငျမှာ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျတှဟော မဲဆန်ဒနယျ (၇) ခုမှာ အနိုငျရရှိထားတယျလို့ ရှေးကောကျပှဲစောငျ့ကွညျ့သူတှကေ ပွောပါတယျ။ ပူတာအိုခရိုငျမှာ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ အဖွရေလဒျကို ခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျဘကျက ကွညောခွငျး မရှိသျောလညျး ပူတာအိုခရိုငျအတှငျးက မဲဆန်ဒနယျ ၇ ခုမှာ ပွညျထောငျစုံ ကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီက အနိုငျရရှိထားပွီလို့ ရှေးကောကျပှဲစောငျ့ကွညျ့သူ‌တှကေ ဆိုပါတယျ။
ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ အနိုငျရရှိတဲ့ မဲဆန်ဒနယျတှကေ ပူတာအိုခရိုငျအမှတျ(၁) အမြိုးလှတျတျော၊ ပွညျသူ့လှတျတျော (နောငျမှနျမွို့ နယျ)၊ ပွညျသူ့လှတျတျော (ဆှမျဘရာဘှမျမွို့နယျ)၊ ပွညျသူ့ လှတျတျော (ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ)၊ အမှတျ(၁) ပွညျနယျ လှတျတျော(နောငျမှနျမွို့နယျ)၊ အမှတျ(၁) ပွညျနယျလှတျတျော (ဆှမျဘရာဘှမျမွို့နယျ)၊ အမှတျ(၂) ပွညျနယျလှတျတျော (ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ) စတဲ့မဲဆန်ဒနယျတှမှော အနိုငျရရှိနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပူတာအိုခရိုငျအတှငျးမှာ မွို့နယျ ၅ ခုရှိပွီး ပူတာအိုမွို့နယျ၊ မခမျြးဘော့မွို့နယျတို့မှာ အနျအယျလျဒီက အနိုငျရရှိပွီး အမှတျ (၂) ပွညျနယျလှတျတျော (ဆှမျဘရာဘှမျမွို့နယျ) မှာ ပွညျနယျအခွစေိုကျ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ၊ နောငျမှနျမွို့နယျ အမှတျ(၂) ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျမှာ အနျအယျလျဒီ၊ အမှတျ(၂) ပွညျနယျလှတျတျော ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျမှာ ဒူးလေးပါတီ (လီဆူအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးပါတီ) တို့က အသီးသီး အနိုငျရရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/archives/423508
နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ငျြးပခဲ့သညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ မပါဝငျခဲ့သော မဲဆန်ဒနယျမွမြေား၌ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲကို တတျနိုငျသမြှအမွနျဆုံးကငျြးပရနျ ဥရောပသမဂ်ဂက တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ မွနျမာနိုငျငံ၏ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ပတျသကျပွီး အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံပေါငျး ၂၇ နိုငျငံပါဝငျသညျ့ ဥရောပသမဂ်ဂ၏ နိုဝငျဘာလ ၉ ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျသော သဘောထားထုတျပွနျခကျြတှငျ ယငျးသို့ ထညျ့သှငျးဖျောပွထားခွငျး ဖွဈသညျ။ ဥရောပသမဂ်ဂ နိုငျငံခွား ရေးရာနှငျ့ လုံခွုံရေးမူဝါဒဆိုငျရာ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲကို ကငျြးပခှငျ့ရသညျ့ နယျမွမြေားတှငျ အောငျမွငျစှာကငျြးပနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈသျောလညျး လကျရှိ ရှေးကောကျပှဲဥပဒမေူဘောငျအား နိုငျငံတကာစံခြိနျစံညှနျးမြားနှငျ့ အကောငျးဆုံးအလအေ့ထမြားနှငျ့အညီ မှမျးမံပွငျဆငျသငျ့ကွောငျး တိုကျတှနျးထားသညျ။
“အမှနျတကယျ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲလုပျမယျဆိုရငျ လကျရှိအစိုးရနဲ့ တပျမတျောက ညှိနှိုငျးပွီးတော့ အအေအေဖှဲ့နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးတဈခုသှားနိုငျအောငျ သဘောတူညီခကျြတဈခု မလုပျရငျ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲက လုပျနိုငျစရာ အကွောငျး မရှိဘူး”ဟု ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။ လကျရှိ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပခဲ့သညျ့ နယျမွမြေားတှငျ ကွားဖွတျရှေး ကောကျပှဲ ကငျြးပ/မကငျြးပသညျမှာ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ(UEC)နှငျ့ သကျဆိုငျကွောငျး ရခိုငျမြိုးသားပါတီ(ANP)၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒျေါအေးနုစိနျကပွောသညျ။ “ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ လုပျဖို့၊ မလုပျဖို့ အဆုံးအဖွတျဟာ တပျမတျော က အကွံပေးသညျဖွဈစေ၊ မပေးသညျဖွဈစေ UEC ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ပဲဆိုငျတယျ” ဟု ဒျေါအေးနုစိနျက ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခဲ့သော ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး မွို့နယျ (၈) မွို့နယျဖွဈသညျ့ စဈတှေ၊ အမျး၊ တောငျကုတျ၊ ရမျးဗွဲ၊ မာနျအောငျ၊ ဂှ၊ ကြောကျဖွူ၊ သံတှဲ မွို့နယျတို့တှငျ ရခိုငျမြိုးသားပါတီ(ANP)မှ လှတျတျောနရောအမြားစုကို အနိုငျရရှိ ထားကွောငျး ယငျးပါတီထံမှ သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76885
၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲအပွီး အစိုးရသဈတဈရပျတကျလာရငျ လှိုငျကျောမွို့နယျ စကျမှုဇုနျမှာတညျဆောကျထားတဲ့ အကွီးစား ခဲသတ်တုစကျရုံကို တာဝနျယူမှုတာဝနျခံမှုရှိဖို့အတှကျ သတိပေးနိုးဆျောသှားမယျလို့ ကရငျနီ အကွီးစားရငျးနှီးမွှပျနှံမှုစီမံကိနျး စောငျ့ကွညျ့ ရေးကှနျရကျအဖှဲ့က အစီရငျခံစာတှေ၊ စာအုပျတှေ စတငျထုတျဝဖွေနျ့ခြိလကျြရှိနပေါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြထိ ခိုကျမှု ဆနျးစဈခွငျး (EIA) စနဈ၊ ကနဦး ပတျဝနျးကငျြ ဆနျးစဈခွငျး (IEE) ၊ ပတျဝနျးကငျြ စီမံခနျ့ခှဲမှု အစီအစဉျ (EMP) တှေ မခပြွနိုငျသေးခငျမှာပဲ လှိုငျကျောမွို့နယျ နှားလဝိုးကြေးရှာအုပျစုထဲက စကျမှုဇုနျမှာ ခဲသတ်တုသနျ့စငျ စကျရုံကိုတညျဆောကျ နတေဲ့အပျေါမှာ အစိုးရကနေ တာဝနျယူမှုတာဝနျခံမှုမရှိတဲ့အပျေါ အခုလို တိုကျတှနျးနိုးဆျောလိုကျ ကွတာဖွဈပါတယျ။
ကရငျနီ အကွီးစားရငျးနှီးမွှပျနှံမှုစီမံကိနျး စောငျ့ကွညျ့ ရေးကှနျရကျ(KMIW) စောအယျစေးက “ ဒီလိုစီမံကိနျးမြိုးကို ဒီနောကျ တကျလာမယျ့ အစိုးရသျောလညျးကောငျး၊ ကနြျောတို့ အစိုးရ ဟောငျးလဲ ဖွဈရငျဖွဈမယျ၊ အစိုးရ အသဈဖွဈရငျလဲဖွဈမယျ ဒီအပျေါမှာ သူတို့ တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးရမယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ကနြျောတို့ ကွိုတငျပွီးတော့ သတိပေးလိုကျတဲ့ သဘော မြိုးပေါ့။”လို့ ပွောပါတယျ။ စီမံကိနျးကနေ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာနဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိခိုကျစရာတှမှော ခြိုးဖောကျခံ ရမှုတှမြေားကွီးကွုံနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ၎င်းငျးစကျရုံတညျဆောကျမှုနဲ့ပတျသကျလို့ ဒသေခံတှနေဲ့ သှားရောကျတှဆေုံ့ပွီး နောကျမှာ အဆိုပါ စကျရုံရဲ့ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးတှကေို ခပြွလိုကျတဲ့အခါမှာ ဒသေခံတှအေနနေဲ့ စိုးရိမျမှုတှရှေိနတေယျလို့ မွနျမာနိုငျငံပှငျ့လငျးမွငျသာမှုနှငျ့တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှုဆိုငျရာ အရပျဖကျမဟာမိတျအဖှဲ့မှကယား(ကရငျနီ) ပွညျနယျတာ ဝနျခံ ခှနျးအနျးဂလြိုကပွောပါတယျ။
“ ထုတျတဲ့စာအုပျရညျရှယျခကျြကတော့ ကနြျောတို့ ဒီ ပူးပေါငျးကွံစညျမှု အစီရငျခံစာရဲ့ နောကျဆကျတှဲတဈခုလို့လဲ ပွော လို့ရတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပူးပေါငျးကွံစညျမှု အစီရငျခံစာမှာ ပါတဲ့အကွောငျးအရာက ဒီတဈခုနဲ့ မပွီးဘူး။ ဘာလို့ဆို တော့ သူ့ရဲ့မူရငျးအစီအစဉျရှိတယျ။ အဲ့ဒီမူရငျးအစီအစဉျကို အခုခြိနျထိ ဘယျသူမှမပွောသေးဘူး။ အစိုးရလဲ တာဝနျမယူ ဘူး။ ဘယျသူမှမပွောဘူး။ ဒီကုမ်ပဏီကလဲ မပွောသေးဘူး။ ဒီစီမံကိနျးက အရမျးကွီးတယျ။ အဲ့ဆိုတော့ ဒီလကျရှိပူးပေါငျး ကွံ စညျမှု အစီရငျခံစာမှာပါတဲ့ စီမံကိနျးဟာ ကနြျောတို့ ဒီနမေိ့တျဆကျတဲ့ စာအုပျရဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုအနနေဲ့ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့ မဖွဈမနပွေောဖို့ လိုအပျတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ပထမဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြပါတယျ။”လို့ စောအယျစေး ကပွော ပါတယျ။ ဒီအပျေါမှာ ကရငျနီအရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေနပွေီး ထောကျပွဝဖေနျနတေဲ့အပျေါမှာတော့ ကုမ်မဏီဘကျကနေ ပွီးတော့ သကျဆိုငျရာ အစိုးရဌာနဆိုငျရာတှနေဲ့ စနဈတကဆြောငျရှကျထားတဲ့အကွောငျးကို သတ်တုသနျ့စငျစကျရုံတညျ ဆောကျနတေဲ့ Global South Industrial Co.ltd ကုမ်ပဏီ ဒါရိုကျတာ ဦးဝငျးမျော အခုလို ပွနျလညျတုနျ့ပွနျပွောဆို လိုကျပါတယျ။
ကရငျနီအကွီးစားရငျးနှီးမွှပျနှံမှုစောငျ့ကွညျ့ရေးကှနျယကျအဖှဲ့ (KMIW) အဖှဲ့ကို ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျအတှငျးက လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ. သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ မွယောအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ. တောငျသူလယျသမားအခှငျ့အရေး ဆိုငျရာ. ဌာနတေိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးဆိုငျရာအဖှဲ့တှနေဲ့ နိုငျငံရေးအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ အရေးတှကေိုလုပျဆောငျနတေဲ့ လူထုအခွပွေုအရပျဘကျ အဖှဲ့ (၅)ဖှဲ့ဖွငျ့ဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76847
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးရှတှေ့ငျ နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးက တရားမြှတမှုမရှိသညျ့ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျမြားအား အလိုမရှိဟုဆိုကာ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့သညျ့ ဦးဆောငျခဲ့သူနှဈဦးအား ငွိမျးခမျြးစှာစုဝေးခှငျ့နှငျ့ စီတနျးလှညျ့လညျ ခွငျးဆိုငျရာဥပဒေ ပုဒျမ ၁၉ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ဥတ်တရသီရိမွို့နယျ ဘုရားကုနျးမွို့မရဲစခနျးမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
“ခေါငျးဆောငျတဲ့နှဈဦးကို (ပ) ၆၅/ ၂၀၂၀ ငွိမျးစုစီဥပဒပေုဒျမ ၁၉ နဲ့ ခုညပိုငျးမှာ အမှုဖှငျ့လိုကျပါတယျ။ ဇျောလငျးနဲ့ ညီညီ (ခ) ထှနျးမွငျ့အောငျဖွဈပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ ယငျးဆန်ဒပှဲတှငျ ဦးဆောငျသူနှဈဦးမှာ ဒက်ခိဏသီရိမွို့နယျ ပရဟိတ အသငျးမှ ဦးဇျောလငျးနှငျ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရှကွောပငျရပျကှကျအတှငျး ပါတီဝငျမြား၏ နအေိမျသို့ သှားရောကျတှဆေုံ့ရာ၌ ကိုဗဈကပျကာလထုတျပွနျထားသညျ့ ဒသေန်တရအမိနျ့အား ဖောကျဖကျြကြူးလှနျသညျ့ အတှကျ အရေးယူပေးရနျတိုငျကွားခဲ့ဖူးသညျ့ ညီညီ(ခ) ထှနျးမွငျ့အောငျတို့ ဖွဈသညျ။
ငွိမျးခမျြးစှာစုဝေးခှငျ့နှငျ့ စီတနျးလှညျ့လညျခွငျးဆိုငျရာဥပဒေ ပုဒျမ ၁၉ တှငျ မညျသူမဆို ပုဒျမ ၄ ပါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားနှငျ့အညီ သကျဆိုငျရာသို့ အသိပေးတငျပွခွငျးမရှိဘဲ စုဝေးခွငျး သို့မဟုတျ စီတနျးလှညျ့လညျခွငျးပွုကွောငျး ပွဈမှုထငျရှားစီရငျခွငျး ခံရလြှငျ ထိုသူကို သုံးလထကျမပိုသော ထောငျဒဏျဖွဈစေ၊ ကပျြသုံးသောငျးထကျမပိုသော ငှဒေဏျဖွဈစ၊ ဒဏျနှဈရပျလုံး ဖွဈစေ ခမြှတျရမညျဟု ပါရှိသညျ။ https://news-eleven.com/article/197703
ရခိုငျစဈဘေးရှောငျမြားကို ကိုယျခငျြးစာနာမိ၍ ကခငျြစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအမြိုးသမီးအဖှဲ့ခြုပျမှ ရခိုငျ စဈဘေးရှောငျမြား အတှကျ ငှကေပျြ ၂၅ သိနျးကို မယေုဒသေ ပရဟိတအဖှဲ့မှတဆငျ့ နိုဝငျဘာ ၁ဝ ရကျနကေ့ ထောကျပံ့လှူဒါနျးလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ကခငျြစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအမြိုးသမီးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဖွဈသူဒျေါထုနနျက“ ကြှနျမတို့ ကခငျြတှဟော စဈဘေးရှောငျ ဘဝ အမြားကွီးဖွတျသနျးခဲ့ကွရတယျ။ ဒါတှကွေောငျ့ ကြှနျမတို့ ခံစားဖူးတဲ့အတှကျ ရခိုငျမှာ ဖွဈနတောတှကေို ကိုယျခငျြးစာ နာမိလို့ပါ။ ကြှနျမတို့အမြိုးသမီးတှမှော ပိုပွီးခံစားကွရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့နဲ့ ကြှနျမတို့အမွဲတမျးအတူရှိနမှောပါလို့ပွော ခငျြတယျ။ ရှလြေှ့ောကျလညျး အမြားကွီးကူညီနိုငျအောငျ ကွိုးစားနပေါတယျလို့။ ရခိုငျစဈဘေးသငျ့ ပွညျသူတှနေဲ့ အဲဒီမှာ ရှိနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှကေလညျးအားလုံး ခံနိုငျရညျရှိအောငျ ကွိုးစားကွပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ”ဟုပွောသညျ။ ကိုဗဈ ကာလတှငျ အခကျအခဲမြိုးစုံဖွငျ့ ရငျဆိုငျနကွေရသညျ့ ရခိုငျစဈဘေးရှောငျအမြိုးသမီးမြား၊ သကျကွီး ရှယျအိုမြားနှငျ့ ကလေး သူငယျမြားကို ပို၍ ကိုယျခငျြးစာနာမိကွောငျး၊ သို့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ စုပေါငျးကောကျခံလှူးဒါနျး လိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ရခိုငျစဈဘေးသငျ့မြားသို့ ယခုကဲ့သို့ လှူးဒါနျးရသညျ့အတှကျ ဝမျးသာကွောငျးသူမကပွောသညျ။
မယေုဒသေ ပရဟိတအဖှဲ့မှ ၎င်းငျးအလှူငှမြေားအားလကျခံရရှိပွီး စဈဘေးရှောငျအမြားအတှကျ အထှထှေေ စားနပျရိက်ခာလှူ ဒါနျးသှားမညျဟု ၎င်းငျးအဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးဖွဈသူ ကိုမယေုထှနျးကပွောသညျ။ “ ငှကေပျြ နှဈဆယျ့ငါးသိနျးလှူတာပါ။ ရခိုငျ စဈဘေးရှောငျတှေ အခကျအခဲတှေ ဖွဈနကွေတယျကွားလို့ အခုလိုဖွဈနတောကို သူတို့ စိတျမကောငျးခံစား နကွေရ တဲ့အတှကျ လှူဒါနျးကွတာလို့ ဆိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ပွောခငျြပါတယျ။ အခုလို လှူဒါနျး ပေးတဲ့အတှကျပေါ့”ဟုပွောသညျ။ ၎င်းငျးတို့ အမြိုးသမီးအဖှဲ့မှာရှမျးပွညျနယျတှငျ အခွစေိုကျသညျ့ ကခငျြအမြိုးသမီးအဖှဲ့ အစညျးတဈခုဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm /news-76890
တိုငျးရငျးသားပါတီတှရေဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှဟော အဖှဲ့ခြုပျ ရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ တူညီတာကွောငျ့ နောကျလာမယျ့ အနာဂတျ မှာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုတှရေဲ့ ဆန်ဒတှကေို အလေးထားဆောငျရှကျသှားမယျလို့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျက ပွော ကွားလိုကျပါတယျ။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျက “နောငျအနာဂတျမွနျမာနိုငျငံအတှကျ ရှေးရှုရမညျ့ ပွညျထောငျစုအရေးကိစ်စ”နဲ့ ပတျသကျ ပွီး တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီ ၃၉ ပါတီကို ဒီနညေ့နေ စာပေးပို့ ပွောကွားလိုကျတာပါ။ တိုငျးရငျးသားပါတီတှဟော နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနေ့ ကငျြးပခဲ့တဲ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ မိမိတို့ ပွညျနယျအသီးသီးမှာ တကျကွှစှာ ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့ကွ တာကို သတိမူမိပွီး အခြို့ပွညျနယျတှမှော တိုငျးရငျးသားပါတီအခြို့ ကနြေပျဖှယျ ရလဒျရခဲ့ကွပမေဲ့ တခြို့ပါတီတှကေ ရညျမှနျးခကျြအတိုငျး မဖွဈလာကွဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘယျလိုအခွအေနေ ရောကျသညျဖွဈစေ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ နောကျအနာဂတျမှာ ဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစု မမှိတျမသုနျ ဆကျလကျကွိုးပမျးသှားမယျလို့ ကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ http://burmese.dvb. no/archives/423636
ကခငျြ၊ ကရငျ၊ ခငျြး စသညျ့ ပွညျနယျမြားတှငျ အနိုငျရ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ NLD ပါတီက အပွတျအသတျ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ကယား၊ မှနျပွညျနယျတို့တှငျလညျး အစိုးရဖှဲ့နိုငျသညျအထိ အနိုငျရရှိခဲ့သညျဟု သကျ ဆိုငျရာ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ မြားထံမှ သိရသညျ။
ခငျြးပွညျနယျတှငျ မဲဆန်ဒနယျ ၃၉ နရော ရှိသညျ့အနကျ လှတျတျောသုံးရပျလုံးအတှကျ NLD ပါတီက ၃၆ နရော အထိ အနိုငျရရှိခဲ့သညျ။ ခငျြးပွညျနယျ၏ NLD ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးဇိုဘှေ့ က “ဒီတဈခါက ကနြျောတို့က ၃၉ နရောမှာ ၃၆ နရော နိုငျတယျ နျော။ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့က ၉၂.၃ နဲ့ အနိုငျရရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျပါတီမှ မချေါပဲနဲ့ အစိုးရဖှဲ့ ဖို့အတှကျ စီ စဉျထားပါတယျ။ ကနြျောတို့က ၂၀၁၅ ထကျ ပိုပွီး ဒီတခါမှာ သာသှားတာပါ” ဟု ပွောသညျ။ NLD ပါတီ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သညျ့ နရော ၃ နရောထဲမှ ဟားခါးမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောအမှတျ-၁ တှငျ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) တဈနရော၊ တှနျးဇံမွို့နယျတှငျ ဇိုမီးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီက ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျမွတှေငျ တဈနရောနှငျ့ ပွညျနယျလှတျတျော အမှတျ (၂) နယျမွတှေငျ တဈနရော အနိုငျရရှိ ခဲ့ ကွသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ၏ ဗမာတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး ဦးခငျမောငျမွငျ့(ခ)ဦးဒိတျက ပွညျနယျအတှငျး NLD ပါတီ၏ မဲရရှိမှု နောကျဆုံးအခွအေနနှေငျ့ ပတျသကျ၍ “လကျရှိက ပွညျနယျထဲမှာ ကနြျောတို့က ၃၆ နရောမှာ ၂၉ နရော လောကျ နိုငျထား တယျ။ အစိုးရဖှဲ့ဖို့တောငျပိုနသေေးတယျ။ ၂၆ ဆိုရငျ အစိုးရဖှဲ့လို့ရတာဆိုတော့လေ။ ၃၆ နရောမှာ ပွညျသူတှကေ မှနျမှနျ ကနျကနျစဉျးစားတှေးချေါတတျလို့ အခုလိုနိုငျတာ။ ပါတီဆိုကျကတော့ ပွညျနယျကတော့ ဗဟိုညှနျကွားခကျြ အတိုငျးပဲ သှားရမှာပေါ့။ အခုဒီစာရငျးက အတညျပွု တယျဆိုတာက ကနြျောတို့ မဲဆန်ဒနယျက လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တှနေဲ့ အောငျနိုငျရေးအဖှဲ့ ခြိတျဆကျပွီး ရတဲ့ဟာနျော။ ပွညျနယျကျောမရှငျက အတညျပွုတဲ့ဟာတော့ မဟုတျသေးဘူးနျော” ဟု ပွောသညျ။ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးတှငျ နမျ့ခမျး၊ မနျတုံ၊ နမျ့ဆနျ မွို့နယျတို့တှငျ တအာငျးအမြိုးသားပါတီ (TNP) က နမျ့ဆနျ၊ မနျတုံ နှငျ့ နမျ့ခမျးမွို့နယျတို့တှငျ လှတျတျောသုံးရပျစလုံးတှငျ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ကှတျခိုငျမွို့နယျတှငျ ပွညျနယျ (၁) တှငျ တဈနရော၊ မူဆယျခရိုငျတှငျ အမြိုးသားလှတျတျောတှငျ တဈနရော အနိုငျရရှိထားသညျ။ https://www.bnionline.ne t/mm/news-76881
နိုဝငျဘာ ၈ ရကျမှာကငျြးပသညျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနတှေ့ငျ တောငျကွီး အေးသာယာရုံးသို့ မဲလာပေးသညျ့ အမြိုးသားတဦး ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျရောဂါပိုးရှိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့နယျ အေးသာယာမွို့ရှိ မဲရုံတဈရုံတှငျ မဲသှားပေးခဲ့သညျ့ အမြိုးသားတဈဦးသညျ ယနေ့ နိုဝငျဘာ (၁၂) ရကျမှာ Rapid Antigen Diagnostic Test Kit နှငျ့ စဈဆေးရာမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး သြှမျးပွညျနယျ ကုသရေး နှငျ့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာဇဝနကို က သြှမျးသံ တျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။“သူနဲ့ ထိတှသေူ့ကတော့ သူ့မိသားစုရှိတယျ။ ဘယျနှဈယောကျလညျးတော့ သခြောမသိရဘူး။ စောငျ့တဲ့နရောမှာ သူ့ရဲ့ အရှေ့ သူ့ရဲ့ အနောကျ ဘယျသူလညျး ဆိုတာကိုတော့ ပွနျလိုကျလို့ မရဘူးဖွဈနတေယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အစဉျလိုကျတိုငျး နာမညျယူထားတာမဟုတျဘူး။”ဟု ဒေါကျတာဇဝနကို က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
လကျရှိမှာ နိုဝငျဘာ (၈) ရကျနေ့ အေးသာယာမွို့ရှိ မဲရုံ အမှတျ(၃) မှ မဲရုံစောငျ့သူ အားလုံးကို Quarantine ဝငျထား ခိုငျးလိုကျကွောငျး သိရသညျ။“ရနျကုနျသှားဖို့အတှကျ ဒီနမှေ့ာ Test Kit နဲ့ စဈလိုကျတာ” ဟု ဒေါကျတာ ဇဝနကို က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျးတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျသူ (၁၅၀) ဦးကြျောရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19447
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး နာဂကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ လရှေီးမွို့နယျ၌ NLD ပါတီက ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဆန်ဒမဲပေးနိုငျရနျ မှတျပုံတငျအတုပွုလုပျမှု၊ ငှငေါးသောငျးကပျြပေး၍ မဲထညျ့ခိုငျးမှု၊ ခရီးလှနျနသေူ ကိုယျစားကွိုတငျ မဲထညျ့ပေးမှုစသညျမြား ပွုလုပျခဲ့သညျဟုဆိုကာ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီမှ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ နိုဝငျဘာလ ၁၀ ရကျနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ တိုငျကွားလိုကျကွောငျး လရှေီးမွို့နယျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီမှ တိုငျးဒသေကွီး (၂) လှတျတျောကိုယျ စားလှယျလောငျး ဦးရှိသီး၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။
အဆိုပါတိုငျကွားစာထဲတှငျ သတျမှတျခြိနျကြျောလှနျမှရောကျသော ကွိုတငျမဲမြားလကျခံခွငျး၊ ကုံကိုငျလုံရှာမမဲရုံတှငျ ဆန်ဒမဲ ပေးနိုငျရနျ မှတျပုံတငျမြား အတုပွုလုပျမဲထညျ့စမှေု၊ ဖှနျသရကျကြေးရှာတှငျ မသမာနညျးလမျးဖွငျ့ ငှငေါးသောငျးကပျြပေး၍ NLD ပါတီတှငျ မဲထညျ့စမှေုစသညျ့အခကျြမြားနှငျ့ တိုငျကွားထားကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။“ပွီးတော့ ပနျးဆပျ ကြေးရှာ မှာ ခရီးလှနျနသေူကိုယျစား ကွိုတငျမဲထညျ့ပေးမှု၊ ဆှမ်မရာအမှတျ- ၁ မဲရုံ USDP နှဈဆယျ့လေးမဲအပျေါ UEC တံဆိပျတုံး မှငျအနညျးငယျစှနျးထငျနတောကို ပယျမဲအဖွဈသတျမှတျမှု၊ တိုငျး (၂) နယျမွမှော ဆန်ဒမဲမပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျပွီး မဟုတျမမှနျ စာဖွနျ့ဝမှေု၊ NLD ပါတီကို မဲထညျ့ရငျ ဆိုလာနဲ့ မီးရမယျ့အကွောငျး ကုံကိုငျလုံရှာမမှာ စညျးရုံမှု စတာတှနေဲ့ တိုငျထားပါတယျ”ဟု လရှေီးမွို့နယျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီမှ တိုငျးဒသေကွီး (၂) လှတျတျောကိုယျစား လှယျလောငျး ဦးရှိသီးက ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပကျသကျ၍ ကနြေပျမှုမရှိပါက ရဲအရေးပိုငျသညျ့ကိစ်စဖွဈသောကွောငျ့ ရဲစခနျး၌သာ တိုငျကွားရနျ ပွောကွား ထားကွောငျး၊ ပယျမဲ ခိုငျလုံမဲ ကိစ်စရပျမြားကို မဲရုံးမှူးက ဆုံးဖွတျကွောငျး၊ မဲရုံးမှူးဆုံးဖွတျသညျ့ ကာလအတှငျး မဲရုံ ကိုယျစားလှယျ အကူကိုယျစားလှယျက ကနျ့ကှကျပိုငျခှငျ့ရှိကွောငျး ရှေးကောကျပှဲဥပဒအေရ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ လောငျး အမညျစာရငျး ကွငွောအပွီး ၄၅ ရကျအတှငျး သကျသအေထောကျအထား ခိုငျလုံစှာဖွငျ့ UEC ထံ ငှကေပျြ ငါးသိနျး ပေးကာ ခုံရုံတှငျ တိုငျကွားခှငျ့ရှိကွောငျး နာဂကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲမှ အတှငျးရေးမှုး ဒျေါသနျးသနျးဝငျးက ပွောကွားသညျ။ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ၏ တိုငျကွားမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ လရှေီးမွို့နယျ NLD ပါတီမှ လကျရှိ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးရိထငျ “သူတို့တငျတော့ တငျထားတာပါပဲ။ သူတို့ကို ပွနျပွီးတော့ စှပျစှဲရမှာ အမြားကွီးပဲ။ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာလညျး သကျသအေထောကျအထားတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုလုပျရ မလဲဆိုတာ ပါတီနဲ့ တိုငျပငျကွညျ့အုံးမယျ။ ဒီအခြိနျကတော့ ဘာမှမပွောခငျြသေးဘူး” ဟု ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/197661